फुलेको पेट भएको बिरालाहरू, के यो गम्भीर छ? | Noti बिरालाहरू
के तपाईंको बिरालोमा छ? पेट सुज्यो? यदि त्यहाँ केहि छ जुन तुरून्त देख्न सकिन्छ र हामी लगभग तत्काल चिन्तित छौं, यसले हाम्रो बिरालो सामान्य भन्दा बढि सूजन भएको पत्ता लगायो। जब यो हुन्छ, यो आवश्यक छ कारणहरू निर्धारण गर्नुहोस् जति सक्दो चाँडो सकेसम्म उत्तम उपयुक्त उपचारलाई जतिसुकै चाँडो गर्न सकिन्छ।
त्यहाँ धेरै सम्भावित कारणहरू छन् र हामी ती सबैमा यस विशेषमा छलफल गर्नेछौं। थप रूपमा, हामी तपाइँलाई के गर्ने भनेर बताउँदछौं ताकि तपाइँको साथीले सकेसम्म चाँडो ठीक हुन्छ, किनभने बिरालाहरूमा सूजीएको पेट एक समस्या हो जुन प्राय जसो पशु चिकित्सकले उपचार गर्नु पर्छ.
1 हामीले कहिले चिन्ता गर्नुपर्छ?
1.4 लिभर नेक्रोसिस
2 फूलेको पेटको अन्य सम्भावित कारणहरू
2.1 आन्द्रा परजीवीहरू
हामीले कहिले चिन्ता गर्नुपर्छ?
अक्सर फूलेको पेट भएको बिरालो जनावर हो जुन सूचीविहीन महसुस गर्दछ, जसले यसको भोक हराउनेछ। तर हामीले यो याद राख्नु पर्छ कि यो सधैं गम्भीर कुरा होइन। धेरै खाना खाने र / वा धेरै छिटो भन्ने फ्यारीमा पेटको साथ पेट समाप्त हुने राम्रो सम्भावना हुन्छ। तसर्थ, यी मामिलाहरूमा सामान्यतया पशु चिकित्सा ध्यान अनुरोध गर्न आवश्यक पर्दैन किनकि तिनीहरू सामान्य रूपमा केही दिनहरूमा स्वस्थ हुन्छन्।
जे होस्, यदि हाम्रो साथी सामान्य खान्छ र एक दिन हामीले उसलाई सामान्य भन्दा बढी फुलेको देख्छौं, तब हामीले चिन्ता लिनुपर्नेछ, किनकि यो रोगको पहिलो संकेत हुन सक्छ। पेरिटोनिटिस, crancer, हेपेटाइटिस o कलेजो नेक्रोसिस.
बिरामी संक्रामक पेरिटोनिटिस (FIP) यो एक संक्रामक रोग हो जुन बिरालाको शरीर बिचको कोरोनाभाइरस संक्रमणको गलत तरीकाले प्रतिक्रिया गर्दछ। (FcoV) यद्यपि त्यहाँ केहि मानिसहरू छन् जुन बिना समस्याको भाइरस हटाउनको लागि व्यवस्थापन गर्दछ, त्यहाँ अरूहरू पनि छन् जुन अन्ततः एफआईपी विकास गर्दैछन्।
FIP रक्त वाहिकाहरूको सूजन हो जुन समयमै उपचार नगिएमा दुर्भाग्यवस जनावरको जीवन समाप्त गर्न सक्छ। कुरालाई अझ नराम्रो बनाउनको लागि, यो त्यस्तो अवस्था हो जुन निदान गर्न गाह्रो छ। आशा छ, यो बायोप्सी द्वारा पत्ता लगाइनेछ।
क्यान्सर एक प्रसिद्ध रोग हो जसले बिरालाहरूलाई पनि असर गर्छ। Flines को मामला मा, तपाईं त्यो जान्नु पर्छ तपाईंको दिनचर्यामा कुनै परिवर्तनले संकेत गरिरहेको हुन सक्छ कि त्यहाँ केहि यस्तो छ जुन यो हुनु हुँदैन।.
बिरालाहरूमा क्यान्सरको सबै भन्दा सामान्य लक्षणहरू पखाला हो, पखाला, भोक र तौल गुमाउनु, बान्ता, डिप्रेसन, अलगाव। हामी देख्न सक्छौं, हामी सोच्न सक्दछौं कि तपाईं वास्तवमा गम्भीर स्वास्थ्य समस्या छैन; वास्तवमा, जब बिरालाहरूमा क्यान्सर फेला पर्दछ, ट्यूमर सामान्यतया फैलिन्छ। त्यसकारण, म जोर दिन्छु, जब तपाईले आफ्नो साथीमा कुनै परिवर्तन देख्नु भयो, जतिसुकै सानो र तुच्छ देखिए पनि, म सुझाव दिन्छु कि तिमी पशु चिकित्सकमा जान सक्छौ।
हेपाटाइटिस तब हुन्छ जब कलेजोले सामान्यतया विषाक्त पदार्थहरू हटाउन असमर्थ हुनबाट फुलेको हुन्छ। यो मधुमेह, ल्यूकेमिया, संक्रमण, वा विषाक्तता द्वारा हुन सक्छ। यदि तपाईंको बिराला यस रोगको शिकार छ भने तपाईंले याद गर्नुहुनेछ ऊ उसको लागि सामान्य भन्दा धेरै पानी पिउँछ, उसले अझ धेरै पिसाब गर्छ, उसको कोट चम्किन्छ र उसको पेट सूजन देखिन्छ।.
उपचार कारणमा निर्भर गर्दछ, तर यदि तपाईं धेरै बिरामी हुनुहुन्छ भने तपाईंले पशु चिकित्सा अस्पतालमा केही दिन बिताउनु हुनेछ जहाँ तरलहरू नसिका मार्फत प्रशासित हुनेछन्। एक पटक घरमा, यो अत्यधिक सल्लाह दिईन्छ सुरु गर्न सुरु गर्नुहोस् मलाई सोडियम कम छ जस्तो लाग्छ यसलाई फेरि हुनबाट रोक्नको लागि।
चिकित्सामा 'नेक्रोसिस' शब्दको अर्थ 'मृत्यु' हो, र 'हेपाटिक' ले कलेजोलाई जनाउँछ। यसैले, कलेजो नेक्रोसिस यसको मतलब हो केही भाग-वाँही-माथि उल्लिखित शरीरको परिवर्तनहरू पार गर्दछ जुन यसलाई यसको कार्यहरू पूरा गर्नबाट रोक्दछ। जब नेक्रोसिस केवल एक सेक्टरमा देखा पर्दछ, यसले धेरै विकारहरू पैदा गर्दैन, तर अन्यथा यसले लिन सक्दछ कलेजो असफलता.
कलेजो अ is्ग हो जुन शरीरलाई डिटोक्सिफाइको लागि जिम्मेवार छ, त्यसैले एक पटक तपाईलाई समस्या हुन थाल्दा तपाईलाई राम्रोसँग कार्य गर्न गाह्रो हुँदै जान्छ। यसलाई ध्यानमा राख्दै, धेरै जसो लक्षणहरू हामी बिरालामा देख्दछौं बान्ता, वजन घटाने y उच्च रक्तचाप.
यो पत्ता लगाउन, पशु चिकित्सकले पेटको अल्ट्रासाउन्ड र यसको अवस्था जाँच गर्न पूर्ण रक्त परीक्षण गर्दछ। उपचार, अन्य सर्तहरूमा जस्तै, कारणमा निर्भर गर्दछ, जुन हेपेटाइटिस देखि गम्भीर संक्रमण हुन सक्छ, त्यसैले पेशेवरले केस जस्तो व्यवहार गर्दछ। सामान्यतया, उसले तपाईंलाई औषधीहरूको एक श्रृंखला दिनेछ र फ्युरीको लागि आराम गर्ने सल्लाह दिन्छ। तर यदि स्थिति धेरै गम्भीर छ, तपाईंले विकल्प रोज्नु पर्नेछ कलेजो प्रत्यारोपण.
फूलेको पेटको अन्य सम्भावित कारणहरू
यद्यपि त्यहाँ धेरै रोगहरू छन् जुन हाम्रो साथी र पार्टनरको पेट फुलेको देखिन सक्छ, त्यहाँ अन्य समस्याहरू पनि छन् जुन हामीले ध्यान दिनै पर्छ। तिनीहरू निम्न हुन्:
विशेष गरी भर्खरै अपनाइएको बिरालाको बच्चा वा सडकबाट हालिएको, तिनीहरूसँग आन्तरिक परजीवीहरू जस्तै टोक्सोप्लाज्मा गोन्डी उदाहरण को लागी। कहिलेकाँही तिनीहरूसँग कुनै लक्षणहरू हुँदैन, सायद थोरै पखाला, तर अझै यो चाँडो भन्दा चाँडो जनावरलाई कीरा पार्नु र यसलाई खोप दिनु महत्वपूर्ण छ जबसम्म तपाईं राम्रो स्वास्थ्य र त्यसो गर्न सही उमेरको हुनुहुन्छ।
आन्तरिक परजीवीहरू बिरालाबाट सामान्य रूपमा मानिसहरूमा पारित हुँदैनन् आधारभूत सरसफाइ नियमहरू जस्तै कि कचौरा बाकस सफा गर्नको लागि पन्जामा राख्नु वा खानु अघि हात धुनु, संक्रमणको जोखिम व्यावहारिक रूपमा शून्य छ। तर जब फ्युरी बाहिर जान्छ वा कहिले यो कीरान भइसकेको छैन - जुन प्रत्येक तीन महिनामा गर्नुपर्छ - सम्भाव्यताहरू बढ्छ।
अपचको रूपमा पनि चिनिन्छ, यो तब हुन्छ जब बिरालाले यो भन्दा बढी खान्छ। पेट फूलिन्छ र पशु बिरामी लाग्न थाल्छ। तपाईंको तनाव र तपाईंको शरीरको तापक्रम बढ्ने सम्भावना छ (यो मानिन्छ कि तपाईंलाई ज्वरो छ यदि यो º º .º डिग्री सेल्सियस भन्दा माथि छ)।
सामान्यतया, तपाई चिन्ता लिनु हुँदैन किनकि केही घण्टामा तपाईले राम्रो महसुस गर्नुहुन्छ। तर यदि हामीले यो देख्यौं कि उसलाई सास लिन गाह्रो छ, वा यदि उसले शौच वा पेशाब गर्दैन भने, हामी पशु चिकित्सा ध्यान अनुरोध गर्नेछौं।
तपाईको पेट फुल्नको लागि अर्को सम्भावित कारण हो उसले केहि नहाल्नु पर्छ: रासायनिक कीटनाशक, खानाको विषको टुक्रा, मानवको लागि औषधि, वा सफाई उत्पादनबाट अलि तरल बनाइएको एक बोट।
यदि तपाइँ शंका गर्नुहुन्छ कि तपाइँको बिरालोलाई विष दिइयो तपाईले यसलाई जति सक्दो चाँडो लिनुपर्नेछ, विशेष गरी यदि तपाईंलाई सास फेर्न समस्या छ भने आदर्श विषको नमूनाको साथ।
हामी आशा गर्दछौं कि यो लेख तपाईको साथीको फुलिएको पेट भएको कारणको निर्धारण गर्न सहयोगी भएको छ। त्यो याद गर्नुहोस् प्रारम्भिक निदान पूर्ण पुन: प्राप्तिका लागि उत्तम ग्यारेन्टी हो ... र चाँडो।
लेखको पूर्ण मार्ग: Noti बिरालाहरू » बिरालाहरू » रोगहरू » बिरालाहरूमा पेट फुलेको छ
जुआन कार्लोस डानियल भन्यो
हेलो एउटा शंकास्पद मसँग एउटा बिराला छ कि त्यो भन्दा पनि अधिक ग्रिल छ। CEMana त्यहाँ छैन। CComer। केहि पनि छैन र म उनलाई के के दिनेछु। पेट Gering। पोन चयन गर्नुहोस्। धेरै बोसो र हिंड्न चाहँदैन। म के गर्न सक्छु 🙁
जुआन कार्लोस डानिएललाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्ते, जुआन कार्लोस।
जब त्यो हुन्छ, उसलाई बिरालोको दूध, वा क्यान दिनुहोस्। तपाईले यसलाई कलेजो-कुक्ड- वा ट्यूना दिन पनि प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ। उसलाई पशु चिकित्सकमा लैजानुहोस् कि उसलाई कुनै समस्या छ कि उसलाई असर गर्दैछ 🙁।
मलाई आशा छ कि यो राम्रो हुँदै जान्छ। खुशी हुनुहोस्।
ब्रायन सी। भन्यो
हेलो डाक्टर, मेरो बिरालामा एक महिना सुगन्धित पेट रहेको छ। ऊ राम्रो खेल्छ, धेरै खान्छ, धेरै दूध पिउँछ तर थोरै पानी पिउँछ। ऊ बिरामी महसुस गर्दैन, ऊ सँधै ऊर्जाले भरिएको हुन्छ, तपाईलाई लाग्छ उसको पानसिताको बारेमा केहि छ, यसले मलाई धेरै चिन्तित पार्छ
ब्रायन सी लाई जवाफ दिनुहोस्।
म पशु चिकित्सक होइन। अझै, तपाईं धेरै दूध पिउन एक फुलेको पेट हुन सक्छ।
यदि उसले सामान्य जीवन बितायो भने, म चिन्ता गर्दिन, तर यदि ऊ बिग्रिन थाल्छ भने, उसलाई बस पशु चिकित्सकमा लैजानुहोस्।
जब बिरालोले एक हप्ताको लागि नखाएको छ, यसलाई तुरुन्तै केहि पनि खानुपर्दछ, बिरालाको दुध समेत। शुभकामना।
ब्रिट्नी बेथलेहेम भन्यो
नमस्ते, मसँग एउटा प्रश्न छ, मसँग लामो समयदेखि बिरालो छ र हालैका दिनहरूमा यो अनौठो भएको छ, यसको पेट फुलेको छ र आधा धूर्तताले पहिले हेरचाह गर्न मनपराउँदछ, अहँ, मलाई के थाहा छैन यससँग गलत छ र यसले मलाई चिन्तित गर्दछ।
ब्रिट्नी बेलनलाई जवाफ दिनुहोस्
माफ गर्नुहोस्, तर हामी तपाईंलाई मद्दत गर्न सक्दैनौं, किनकि हामी पशु चिकित्सक होइनौं। तिनीहरूलाई के हुन्छ थाहा पाउन एकलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
आशा छ यो चाँडै सुध्रन्छ।
बड्डी रनको थियो र उसको पेट फुस्केको थियो, उनको कुनै फ्र्याक्चर थिएन, ऊ अझै उभिरहेको छ तर म आफ्नो पेटको बारेमा चिन्तित छु कि म यो गर्न सक्छु, उसले कुनै अस्वस्थता देखाउँदैन, यो अनौठो हो…।
म तपाईंलाई सिफारिस गर्दछु उसलाई पशु चिकित्सकमा लैजानुहोस्। म पशुचिकित्सक होईन र उनीसँग के छ म तिमीलाई भन्न सक्दिन।
नमस्कार, शुभ रात्री, म मेरो साथीको बिरालोको बारेमा निकै ठूलो सशंकित छु, मैले उनलाई विष दिएँ र खुसीको साथ उनले यसलाई बचाउन सके, तर पछि त्यो बिरालोको पेट एकदम सुलेको र विकृत भयो र यसको पछाडि यो जलिरहेको जस्तो देखियो। छीलो छ। पशु चिकित्सकले उसलाई एउटा पट्टिका बनायो र भने कि उसको केही छैन तर सत्य यो हो कि यो यस्तो चिन्ताजनक छ। अग्रिम धन्यवाद।
यदि यसले चोट पुर्‍याएन भने, यो सम्भवतः यो आफैमा सुधार हुनेछ, तर म अझै सिफारिस गर्दछु कि तपाई दोस्रो पशु चिकित्सा राय सोध्नुहोस्, मात्र केसमा। सिद्धान्तमा यो केहि गम्भीर हुनु आवश्यक छैन, तर यो निश्चित गर्न चोट पुर्‍याउँदैन।
नमस्कार, राम्रो हेर्नुहोस्, मेरो बिरालोको पेट जलेको पेटसँग थियो। मेरो क्लिनिकल अभ्यासमा मैले प्यारासेन्टेसिस गरें, मैले १२० सीसी जलोदर तरल निकाले, मेरो बिरालोले आफ्नो भोक गुमाएन, ज्वरो आएको छैन, म के गर्न सक्छु? प्रोफेलेक्सिस
के तपाईंले ट्यूमर, एक फुलेको कलेजो, वा अन्तर्निहित रोगको खोजी गर्नुभयो? मेरो सल्लाह उनलाई पेशाब र फ्लुइड विश्लेषण, साथ साथै पेटको अल्ट्रासाउन्डको लागि पशु चिकित्सकमा लैजान हो। केवल मामला मा।
उपचारको रूपमा, विशेषज्ञले तपाईंलाई कसरी राम्रो सल्लाह दिन सक्छ भन्ने कुरा जान्दछन्, तर घरमा तपाईं यसलाई प्रोटीनयुक्त धनीलाई दिनसक्नुहुन्छ, सम्भव भएसम्म प्राकृतिक।
यदि तपाईले देख्नुहुन्छ कि यो असजिलो महसुस भएको छ भने यसले दुख्न सक्छ। उहाँलाई पशु चिकित्सकमा लैजानुहोस् उनलाई जाँच्नुहोस् र सबैभन्दा उचित उपचार दिनुहोस्। यो कुनै गम्भीर कुरा नहुन सक्छ, तर सुरक्षित रहनु उत्तम हो।
नमस्कार, तपाईं कस्तो हुनुहुन्छ, मेरो बिरालाको बच्चा months महिना भन्दा अलि कम छ र पेट छ। धेरै फुलेको, म उसलाई पशु चिकित्सकमा लगें, तिनीहरूले मलाई भने कि यो ग्यासहरू हुन सक्छ तर सत्य यो हो कि मलाई डर छ कि यो केहि गलत हो।
यदि तपाईंको बिरालाको बच्चाले सामान्य जीवन बिताउँछ, अर्थात् यदि उसले खान्छ, पिउँछ र आफैलाई राहत दिन्छ भने, सिद्धान्ततः यो चिन्ताजनक छैन। यदि उनले यी things चीजहरू मध्ये कुनै एक गर्न बन्द गरे भने, वा यदि ऊ दु: खी वा निराश महसुस गर्न थाल्छ भने, म दोस्रो पशु चिकित्सा राय सोध्न सिफारिस गर्दछु।
मेरो बिरालाहरु मध्ये एक पटक एकदमै फुलिएको थियो। मैले उनलाई विशेषज्ञमा ल्याएँ, तिनीहरूले एक्स-रे र परीक्षण गरे ... र उनीसँग केहि पनि थिएन। केही दिनमै ऊ निको भयो। तपाईको असुविधाको कारण? अपच
धेरै शान्त, वास्तवमै। यदि यो झन् खराब भयो भने, यसलाई फेरि लिनुहोस्, तर मलाई शंका छ त्यो हुनेछ 🙂।
नमस्कार, आज म आफ्नो घरमा आइपुगे र मैले पत्ता लगाए कि मेरो बिरालो फुलिएको छ, पेटको पेटमा र थोरै ज्वरोको साथ।
ऊ बिरालो हो जुन सडकमा हिंड्छ किनकि हामीले उसलाई बाहिर पठायौं, तर यो पहिलो पटक हो कि हामीले उसलाई यस्तो देख्यौं र उनले धेरै गुनासो गरे।
सत्य यो हो कि मलाई थाहा छैन तपाईसँग के छ, म यसको कदर गर्छु यदि तपाईले मलाई मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ भने, धेरै धेरै धन्यवाद
अलानालाई जवाफ दिनुहोस्
तपाईंले केही खानुभयो जुन तपाईंलाई नराम्रो लाग्यो। त्यो 'केही' बिग्रिएको खानाबाट विषमा कुनै पनि चीज हुन सक्छ, त्यसैले मेरो सल्लाह यो छ कि यदि तपाईंले आज सुधार देख्नुभएन भने, पेशेवरमा जानुहोस्।
यदि तपाइँ बान्ता गर्न को लागी प्रयास गर्नुहुन्छ, यो किनभने तपाईसँग निश्चित रूप बाट केहि चीज छ जसलाई तपाईले पार गर्न चाहानुहुन्छ। यो गर्न, तपाईं उसलाई दुई साना चम्चा नुन पानी दिएर उसलाई मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ।
मेरो बिरालो लडिरहेको थियो र उसले आफैंमा पेशाब गर्यो २ दिन पछि उसले कडा साटो पनि खायो र अब ऊ फुलेको र तनावमा छ .. उसको कडा पन्सा छ .. मैले उसलाई मायालु बनाएँ र उसले मलाई मालिश गर्यो र उसले मलाई शुद्ध गर्यो, यो के हुन सक्छ? कृपया मद्दत गर्नुहोस् = '/
Gastom लाई जवाफ दिनुहोस्
तपाईले के हिसाब गर्नुभयो भने यो मूत्र संक्रमण हुन सक्छ, जस्तै साइस्टिटिस। यो सबै भन्दा राम्रो उपचार को लागी एक पशुचिकित्सक देख्न सिफारिस गरिएको छ। हुनसक्छ तपाईंले भर्खरै उसको खाना परिवर्तन गर्नुपर्नेछ, उसलाई यस प्रकारको समस्याहरूको लागि एक विशिष्ट दिनुहोस्। तर यो ढु more्गाजस्तो बढी गम्भीर कुरा पनि हुन सक्छ।
शुभ साँझ, हामीसँग केही बिरालाको बच्चाहरू छन् एक परामर्श र तिनीहरू मध्ये एक खाए र धेरै उही खेल्छ तर अन्य भन्दा ढिलो छ। मैले रोटी सिटा छोए तिमी शान्त रह्यौ। ऊ धेरै खेल्दैन र सबैको जस्तै खानेछ।
तपाईलाई आन्द्रा परजीवीहरू हुन सक्छ। त्यो उमेरमा तिनीहरू धेरै सामान्य हुन्छन्।
म तपाईंलाई सिफारिश गर्दछु कि तपाईं उनलाई पशु चिकित्सकमा लैजानुहोस् कि किन हो, वा यदि उनीसँग केहि छ भने। जे होस्, यदि तपाईले अरु कुनै लक्षणहरु देखाउँनु भएन भने तिनीहरू प्रायः परजीवीहरू हुन्। र यसको एक सजिलो समाधान छ 🙂।
नमस्ते शुभ दिउँसो,
मसँग--महिनाको बिरालाको बच्चा छ, उनीमा निम्न लक्षणहरू छन्: एउटा आँखाको जलन र पृथकीकरण, छींकने, बलगम र उनको पेट फूलिएको छ, मैले उनलाई पशु चिकित्सकमा लगें र उनीहरूले केही रक्त परीक्षण गरे, उनले मलाई भने कि यदि उनी पीफ छिन भने इथ्निजाइज गर्नु उत्तम हुन्छ, मैले अर्को डाक्टरसँग सल्लाह लिनु पर्छ? के यो परीक्षण सकारात्मक रूपमा आउनुपर्दछ?
शर्लीलाई जवाफ दिनुहोस्
म तपाईंको बिल्लीको बच्चालाई के भइरहेको छ त्यसको लागि धेरै दु: खी छु
जब एक पशु चिकित्सकले मलाई बिरालोलाई euthanizing को बारेमा कुरा गर्छन् ..., म दोस्रो राय सोध्न रुचाउँछु, जुन म सुझाव दिन्छु। बढी छैन।
मेरो बिरालोको बच्चालाई पनि मसँग त्यस्तै समस्या छ, तिनीहरूले तपाईंलाई मद्दत गरे कि उनीहरूले उसको euthanize गरे?
प्रत्येक बिरालो फरक छ, यस कारणको लागि म तपाईंलाई सिफारिश गर्दछु कि तपाईले आफ्नो बिरालाको बच्चालाई पशु चिकित्सकमा लैजानुहोस् यदि उनी राम्ररी राम्रो छैन भने।
कार्ला रोमेरो भन्यो
नमस्ते शुभ दिउँसो !!!
मसँग १२ बर्षको बिरालो छ र राम्रोसँग हालै उसको कपाल झर्दै गइरहेको छ, उसको पेट फुलेको छ भन्दा पनि, मलाई थाहा छैन कि यो धेरै छ वा अरु नै खाएको कारणले हो…।
म त्यहाँ चिन्तित छु !! ऊ पेशाब गर्छ र सामान्य जस्तो मूत्रमण्डल गर्छ। म जान्न चाहन्छु म के गर्न सक्छु? 🙁
कार्ला रोमेरोलाई जवाफ दिनुहोस्
के तपाईसँग परिवारमा कुनै किसिमको तनाव वा समस्या छ? यो तनावको सूचक हुन सक्छ, विशेष गरी यदि तपाईंले हालसालै धेरै खान शुरू गर्नुभयो भने। ऊ छिटो खान्छ कि भनेर हेर्नुहोस्।
मेरो सल्लाह यो छ कि तपाईंले उसलाई एक फिड दिनुहोस् जुन उसको लागि चीउ हुन्छ; त्यो हो, किब्बल तपाईलाई चबाउन बाध्य गर्न पर्याप्त ठूलो छ। र सबै भन्दा माथि, यो महत्त्वपूर्ण छ कि यसमा प्रोटिनको एक ठूलो मात्रा हो। यस तरीकाले तपाई चाँडै नै सन्तुष्ट हुनुहुनेछ र त्यसकारण तपाईले आफूलाई चाहिने भन्दा बढी खानु हुनेछ।
यदि तपाईले सुधार देख्नु भएन भने, सायद उसलाई अधिक गम्भीर समस्या छ जस्तो कि भाइरल रोग हो र त्यो पशु चिकित्सकले हेर्नु पर्ने हुन्छ।
नमस्ते, मसँग9बर्षे बिराला छ जुन खान चाहन्न र सुन्निएको पेट छ र पिसाबबाट बाहिर आउँछ नराम्रो गन्धले, जुन मैले सिफारिस गरेको हुन सक्छ।
यो भर्खरै अपच हुन सक्छ, वा यो क्याडनी क्षति जस्ता बढी गम्भीर कुरा हुन सक्छ जसलाई पशु चिकित्सा ध्यान आवश्यक छ। निश्चितको लागि थाहा पाउनको लागि यो राम्रो हुन्छ कि तपाईंले यसलाई विशेषज्ञमा लैजानुहोस्। त्यतिन्जेल, तपाईं उनको कुखुराको ब्रोथ दिन सक्नुहुन्छ वा उनको भिजेको बिरालोको क्यानको प्रस्ताव राख्न सक्नुहुन्छ, कि त्यसले खान पाउनेछिन भनेर।
नमस्ते, मसँग-हप्ताको बिरालाको बच्चा छ र मलाई यो किन थाहा छैन, तर उनलाई बिहान उनको खाना दिनु अघि मैले देखें कि उसको पेट फुलेको छ र यसले एक किसिमको सिक्किन्छ र त्यसपछि यो डिफिलेट हुन्छ तर दिनभर उसले खाएको छ। सामान्यतया, र मैले थाहा पाएँ कि ऊ एकदम शान्त छ ठीक छ, ऊ धेरै बेचैन छ, के यो ग्याँस हुन सक्छ?
यदि बिरालाको बच्चा ठीक छ, त्यो हो, यदि यसले पूर्ण सामान्य जीवन बिताउँछ भने, यो सम्भवतः केवल ग्याँसहरू नै हुन्छ। अझै पनि, यदि तपाइँ यसलाई नराम्रो हुँदै गइरहेको देख्नुहुन्छ भने, म सिफारिस गर्दछु कि तपाईले यसलाई हेरेमा मात्र हेर्नुहोस्, जे भए पनि।
मेरो बिरालो केही समय अघि ठीक थियो, मेरी आमा भन्छिन् उनले सारा दिन राम्रो खाएकी थिई, तर रातमा उनी उनको कुखुरा दिन चाहन्थिन् जुन उनी मन पराउँछिन्, र उनी खान चाहन्निन। जब ऊ पेटमा हिर्काउँछ ऊ थोरै चिच्याउँछ, र हामी उनलाई अर्को ठाउँमा लगेर उसको चोटपटक लागेको छ कि छैन जाँच्न चाहन्थ्यौं र ऊ आक्रामक भयो र उसको आँखा ठूलो भयो। अब ऊ धेरै पानी पिउन चाहन्छ र ऊ बाथटबमा छ र ऊ बाहिर जान चाहँदैन।
Daliasued लाई जवाफ दिनुहोस्
यदि तपाईं आज केहि खान चाहनुहुन्न भने, बिरालो वा कुखुराको बथानको लागि क्यान हैन भने, तपाईंलाई अप्ठ्यारो पेट हुन सक्छ जुन एक पेशेवरले जाँच गर्नु पर्छ। यदि ऊ आक्रामक छ भने, तौलिया वा कम्बलले उहाँलाई कभर गर्नुहोस्। यस तरिकाले यसले तपाईंलाई स्क्र्याच गर्न सक्षम हुँदैन र तपाईं यसलाई जाँच गर्न सक्नुहुनेछ।
धन्यबाद मोनिका, धेरै दयालु, आज बिहान हामीले उसलाई पशुचिकित्सकमा लैजाने कोसिस गर्‍यौं ऊ केजबाट बाहिर निस्कियो र अब उनी देखा पर्दैन 🙁 उनी आज बिहान केहि पनि खान चाहँदैनथे र उसले सधैं मेरी आमालाई6मा उठाउँदछ। उसलाई उनको कुकीहरू दिन।
यो धेरै टाढा जान सक्दैन। उसलाई खाना छोड्नुहोस् जुन उसले धेरै मन पराउँछ, र यो निश्चित देखाइन्छ। खुशी हुनुहोस्।
नमस्कार शुभ रात्री।
मसँग १ महिनाको बिरालाको बच्चा छ, उनीले बिरालोको गाला खाइन् र सामान्य पानी पिउँछिन्, उनी अब दूध पिउँदिनन्। आज दिउँसो मैले उसलाई केही कुखुरा दिएँ, तथापि दिउँसो मैले ध्यान दिएँ कि उसको पेट फुलेको छ। म बुझ्छु कि तिनीहरू परजीवी हुन सक्छन तर यो उमेरको कीराको छैन। किनकि मैले याद गरें कि उनी सुलेकी थिई, उनले पोप गरेकी छैनन्, तर मलाई लाग्छ कि यो सामान्य छ किनकि उसले केवल बिहान पूप गर्दछ। ऊ अनौंठो व्यवहार गर्दैन, उसको अभिनय सामान्य छ, जस्तो कि सँधै भएको छ। के म चिन्ता लिनु पर्छ? के मैले उनलाई पशु चिकित्सकमा लैजाऊ? म तपाईंको प्रतिक्रियालाई कदर गर्छु।
ठूला खराबीहरू रोक्नको लागि हो, यो पशु चिकित्सकलाई लिन सल्लाह दिइन्छ।
यसैबीच, तपाईं सुक्खा थाइम यसको नियमित खानासँग मिसाउन सक्नुहुन्छ, जसले परजीवीहरूसँग लड्न सक्छ।
नमस्ते कस्तो छ? मेरो बिरालोको कडा पेट र अलि कम छ। फूलेको छैन, सामान्य भन्दा अलि बढी कडा। अन्य पटक मैले उनलाई याद गरें तर अब जब पीआईएफको बारेमा पढ्छु मलाई चिन्ता लाग्छ। उनि ठिक छन्। निद्रा खेल खानु। तर उसको कडा पेट मलाई के हुन्छ भनेर अचम्म लाग्छ। उहाँ १० बर्षको हुनुहुन्छ।
इन्डियानालाई जवाफ दिनुहोस्
के तपाईंले देख्नु भएको छ कि ऊ आफैंलाई राहत दिन आफ्नो कचौरा बक्समा जान्छ? म तिमीलाई सोध्छु किनकि मलाई लाग्छ कि उनीसँग भएको कुरा कब्ज हो।
यसलाई सिरकाको एक बड़ा चमचा दिने प्रयास गर्नुहोस्, र यदि दुई दिन पछि पनि यस्तै छ भने, पशु चिकित्सकलाई हेर्नुहोस्। तर मैले तपाईंलाई पहिले नै भनेको छु कि यदि उसले सामान्य जीवन बितायो भने पक्कै पनि यो गम्भीर हुँदैन।
नमस्ते, म कोरल हुँ।
मसँग बिरालो छ कि एक दिन देखि अर्को दिन उनको पेटमा एकदम फुलेको छ .. बिरालो खाने छ .. pooping .. खेल ..
उसको व्यवहार उस्तै हो ...
कोरललाई जवाफ दिनुहोस्
उसले देख्यो कि ऊ धेरै खायो। यदि तपाईंको बिरालोले सामान्य जीवन बिताउन जारी राख्छ भने, यस्तो सम्भावना हुन्छ कि उनी सायद एक ग्लस थिए।
तैपनि, यदि तपाईं देख्नुहुन्छ कि उसले यस साताको अन्त्यमा सुधार गरेको छैन भने, उनलाई पशु चिकित्सकमा लैजाऊ उनलाई जाँच्न।
योहाfभन्यो
नमस्कार शुभ रात्री। मसँग एक अंगीकृत किट्टी छ: मानोला; उनी अहिले वयस्क छिन्, उनले सबै थोक खाइन्। उनले एक हप्ता अघि कुँदिएका थिए र उही समयदेखि हामीले उसको सुलेको पेट देख्यौं; ग्यासको रूपमा। कहिलेकाँही यो नरम हुन्छ। उनीहरूले सिफारिस गरे कि हामी राम्रो खानामा जान सक्छौं। यो भइसक्यो, तर ऊ यस्तै गरी आफ्नो पेटसँगै निरन्तरता दिन्छ 🙁 म उनलाई बिरामी बनाउन चाहन्न। म विचारहरु प्राप्त गर्दछु। धन्यबाद
योहाfलाई जवाफ दिनुहोस्
कहिलेकाँही यसले केहि दिन लिन सक्दछ तपाईंले सुधार देख्नुभयो भने, अधिक यदि तपाईं हालसालै नयाँ डाईटमा हुनुहुन्छ भने।
जे भए पनि, म यसलाई सुधार गर्न समय समय मा एक सानो चामलको साथ कुखुराको ब्रोच दिने सल्लाह दिन्छु।
नमस्ते, मसँग एउटा प्रश्न छ कि मेरो बिरालोको पेट एकदमै सुन्दिएको छ, ऊ असाध्यै दु: खी छ, ऊ हिंड्न सक्दैन र ऊ खान चाहँदैन, यो दुख्छ किनकि मैले उसलाई छोएपछि उसले चबाउन थाल्छ।
तिमीलाई थाहा छ यदि उसले धेरै खायो वा के उसले खाएन? तिमि दुर्घटनामा परेको छौ?
उसलाई खाने राम्रो लाग्छ कि भनेर हेर्न राम्रो गुणस्तरको बिरालो क्यान दिने प्रयास गर्नुहोस्; अन्यथा, म तपाईंलाई सिफारिस गर्दछु कि तपाईं यसलाई एक परीक्षाको लागि डाक्टरमा लिनुहोस्।
इलिआना डेविड भन्यो
शुभ रात्री, मोनिका! मैले तपाईंलाई लेखेको समयको लागि माफ गर्नुहोस्, तर म तपाईंलाई विशेषज्ञको रूपमा परामर्श दिन चाहन्छु - र माथि उल्लिखित पोष्टको सम्बन्धमाः मसँग १ 15 बर्षे बिरालो छ। उनलाई दुई सातादेखि पखाला लागेको छ। यो सामान्य भन्दा नरम मलको साथ शुरू भयो। मेरो परिवारको पशु चिकित्सकले उसलाई एन्टिडाइरियल + कोर्टिकोस्टेरोइडको साथ औषधी दियो। उहाँ दुई दिनको लागि राम्रो हुनुहुन्थ्यो, लक्षणहरू फेरि देखा नपरिएसम्म। एक अल्ट्रासाउन्ड अनुरोध गरियो, जसले तरल पदार्थको साथ "रेशेय" आन्द्रालाई विस्तृत बनायो। यो आफैले भनेका लक्षणहरूको लागि ट्रिगर हुन सक्छ। उपचार उस्तै रह्यो, खाना परिवर्तन थपियो (उनले हाइपोअलर्जेनिक रोयल क्यानिन सिफारिश गरे)। यसमा हामी चामलको पानी पनि थप्छौं। तर आजसम्म मेरो बिरालो सुधारिएको छैन। उसले आफ्नो छाडा मलहरूको साथ जारी गर्दछ, तर अब तिनीहरू व्यावहारिक रूपमा तरल छन्। राम्रोसँग खानुहोस। तरल पदार्थको प्याला- र सबै कुरा भित्र एनिमेटेड छ - यो कष्टप्रद छ-। मैले भर्खरै यो फुलेको पेटको साथ याद गरें। यो सबै के कारण हुन सक्छ? पूरक अध्ययनको साथ अगाडि बढ्नको लागि यो उचित हो? म धेरै चिन्तित छु, पखाला संग दिन को विस्तार भन्दा बढि।
म तपाईंको उत्तर कदर गर्छु! भवदीय
इलिआना डेभिडलाई जवाफ दिनुहोस्
म एक पशुचिकित्सक होइन, तर म तपाईंसँग मेरो अनुभवको आधारमा बोल्न सक्छु। मेरो सिफारिश भनेको तपाईको फिड परिवर्तन गर्नुहोस्। मासुको उच्च प्रतिशत (न्यूनतम %०%), र कुनै अनाज (कुनै मकै, कुनै गहुँ, वा डेरिभेटिभहरू) को लागि हेर्नुहोस्। दानाले बिरालाहरू, र साथसाथै डाईरियाको लागि संक्रमण समस्या निम्त्याउन सक्छ, किनकि ती खाना हुन् जुन उनीहरू राम्ररी पचाउन सक्दैनन्।
"कम्तिमा नराम्रो" खानेकुरा भन्नु भनेको भात हो, र वास्तवमा डाईरियालाई रोकथाम गर्न थोरै चामलको साथ उनीहरूलाई कुखुराको बदाम दिन सिफारिस गरिन्छ।
धेरै प्रोत्साहन, र अभिवादन 🙂।
नमस्ते, मसँग एउटा प्रश्न छ मसँग एक स्यामेसी सेन्ट्री बक्स छ र मैले उनलाई बूढीपातीको लागि थोपाहरु दिएँ र म उनीहरुलाई निकै गन्धले फुक्रियो कि उनी धेरै राम्रो खेल्छिन्, सबै सामान्य चल्दछन् तर ती ग्यासहरु के उसलाई केहि हुन सक्छ? ??
बिरालाको धुँवा पहिले नै राम्रो नराम्रो गन्ध आउँछ।
तर जब उनीहरू वास्तवमा खराब गन्ध आउँछन् जब हामीलाई चिन्ता गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि यस्तो हुन सक्छ कि बिरालालाई अन्नको उच्च सामग्रीको फिड खुवाइएको छ, कि यो अचानक फिड परिवर्तन गरिएको छ, कि यसले धेरै वा धेरै चाँडो खान्छ, वा पाचन पथमा यसको समस्या छ, जस्तै आन्द्रा परजीवीहरू।
यदि तपाईं सामान्य जीवन बिताउनुहुन्छ भने, सिद्धान्तमा चिन्ता नलिनुहोस्। तर यदि यो जटिल हुन्छ भने, उनलाई पशु चिकित्सकमा लिन हिचकिचाउँनुहोस्, मात्र केसमा।
नमस्कार, मसँग २ महिनाको बिरालाको बच्चा छ, ago दिन अघि उनीहरूले उसलाई कुवा घसेको लागि एउटा इन्जेक्सन दिएका थिए तर आज मैले याद गरें कि उसको पेट एकदम सूजन भएको छ, ऊ सामान्य रूपमा पोपिएर खान्छ, र सधैं जत्तिकै बेचैन छ। यो हुन सक्छ कि ऊसँग अझ पनि परजीवी छ वा यो केहि नराम्रो हुन सक्छ?
तपाईंले इंजेक्शनमा प्रतिक्रिया देखाउनु भएको हुन सक्छ, वा तपाईंले अत्यधिक खानुभएको हुन सक्छ।
यदि यो सोमबार उस्तै हो, वा यदि यसले अन्य कुनै लक्षणहरू प्रस्तुत गर्दछ भने, म यसलाई सिफारिस गर्न पशु चिकित्सकमा लैजाने सिफारिस गर्दछु।
त्यहाँ एउटा पुरुष सडक बिल्ली छ जसको पेट एकदम ठूलो छ, ऊ पातलो छ, तर ऊ राम्ररी खान्छ। मैले यसलाई एक ट्र्यापरको साथ समात्ने प्रयास गरें र म भाग्य पाएनन्, बिरालाहरूको उपनिवेश छ, मैले १० र १ p पल्पुहरू वितरण गरेको छु। म खराब छु किनकि म उसलाई समात्दिन, म उसलाई कष्टमा मर्नु चाहन्न।
यदि तपाईं सक्नुहुन्छ भने, हेर्नुहोस् यदि तपाईं बिरालोको पिंजरा पाउन सक्नुहुन्छ। भिजेको खानाको साथ कुण्ड भित्र राख्नुहोस्, र त्यसपछि तपाईंले गर्नुपर्ने भनेको पर्खनु पर्छ।
यदि तपाईं सक्नुहुन्न भने, पिँजरी बिना यसलाई आकर्षित गर्ने प्रयास गर्नुहोस्, तपाईंलाई स्क्र्याच नगर्न ग्लोभहरू राख्दै। २,,, वा जो कोही मानिस चाहिन्छ को मद्दतले उसलाई कुनामा राख्ने प्रयास गर्नुहोस्। अलि अलि गर्दै उहाँसँग नजिक हुनुहोस्, र तौलियाले उसलाई कभर गर्नुहोस्। त्यसो भए, यसलाई तत्काल क्यारियरमा राख्नुहोस् र त्यसलाई छोप्नुहोस् ताकि बिरालोले केहि पनि देख्न सक्दैन र अझ बढ्ता झगडा गर्दैन।
नमस्ते, म मेरो बिरालोको बारेमा चिन्तित छु, उहाँ months महिनाको हुनुहुन्छ, केही दिन अघि उसले आफ्नो खामको छेस्को निकाले, जुन उसले पहिले माया गर्यो, अब उनी केवल केही क्रोकेटहरू खान्छ र धेरै पानी पिउँदछ र उसको पानसिता हो धेरै दिक्क लाग्यो जब ऊ कष्टमा कुनै प्रतिक्रिया देखाउँदैन, मलाई थाहा छैन कि ऊसँग हुन सक्छ र उसले कभर्स पनि कस्छ र थाहा छ म त्यो उन्माट लिन के गर्ने भनेर मलाई थाहा छैन।
शांतिबेललाई जवाफ दिनुहोस्
यदि तपाईं अब सुक्खा फिड खानुहुन्छ भने, तपाईंको पानीको मात्रा बढ्नु सामान्य हो, त्यसैले सिद्धान्तमा तपाईंले चिन्ता लिनु हुँदैन। अब, यदि उसले आफ्नो समय पिउन खर्च गर्दछ भने, म उनलाई पशु चिकित्सकमा लैजाने सल्लाह दिन्छु, किनकि यो रोगको पहिलो लक्षण हुन सक्छ।
नमस्कार, शुभ दिउँसो, मेरो बिरालो छ छ
महिना र उनको पेट फुलेको छ, उनको गुदा चिढचिडेको छ र उनी यति धेरै चक्कर आउँछिन् कि यदि ऊ हिंड्यो भने ऊ तल झर्छ र मलाई के गर्ने थाहा छैन, उनलाई देखेको वेटहरूले यो के हो थाहा गरेनन्, उनीहरूले भने मलाई तीन अलग चीज
म धेरै दु: खी छु कि तपाईंको बिरालो यस्तै छ 🙁
के तपाईंलाई थाहा छ यदि तिनीहरूले न्यूरोलॉजिकल रोगहरूलाई इन्कार गरे भने? के तपाईलाई हालसालै ओटिटिस भएको छ, वा केहि तपाईले विष पाएको छ? बिरालाहरूले उनीहरूको शरीरबाट विष हटाउन लामो समय लिन सक्दछन्।
मेरो सल्लाह अर्को पशु चिकित्सक खोज्न हो। केवल तिनीहरूले मात्र तपाईको बिरालोमा बताउन सक्छन्।
नमस्कार, म सोध्न चाहन्छु, मसँग २-महिनाको बिरालाको बच्चा छ, मैले उनलाई एक महीनामा अपनाएको थिएँ र त्यस समयदेखि उनीको पेट संकटे, उनी सामान्य खान्छिन्, उनी धेरै पानी पिउँछिन्, खेलिन्छन् र सबै सामान्य हुन्छन्। Days दिन अगाडी मैले उसलाई परजीवीहरुका लागि थोपा दिएँ तर कुनै परिवर्तन भएन, तर यसले मलाई चिन्ता गर्‍यो किनकि उसको पेटले आवाज गर्छ र जब उसको पेटलाई छुन्छु म उसको पेट जत्तिकै महसुस गर्दछु। मलाई वास्तवमा थाहा छैन यो के हुनेछ, तर यसले मलाई चिन्ता गर्दछ। , यो के हुन सक्छ?
घाटीलाई जवाफ दिनुहोस्
यो धेरै पानी पिउनबाट हुन सक्छ। बिरालाहरूले प्रत्येक तौलका लागि १०० मिलीलीटर पानी पिउनुपर्दछ यदि तिनीहरूले सुक्खा फिड खान्छन्, अर्थात् यदि तिनीहरू १ किलोग्राम तौल गर्छन्, तिनीहरूले १०० मिलीलीटर पानी पिउनुपर्दछ; यदि तिनीहरूले भिजेको फिड खाए भने पानीको मात्रा ml० एमएल / तौल हुनेछ।
यदि उसले सामान्य जीवन बितायो भने, अर्थात्, यदि उसले खान्छ र आफ्नो व्यवसाय राम्रोसँग गर्दछ, र ध्यानमा राख्दै कि तपाईंले उसलाई पहिरिन बनाउनुभएको छ, सैद्धान्तिक रूपमा म चिन्ता लिने छैन। कहिलेकाँही आवाज सुन्न सकिन्छ तिनीहरूले खाना खाए पछि, तिनीहरूको पाचनको कारण।
जे भए पनि, यदि तपाइँलाई श doubts्का लाग्छ भने, पशु चिकित्सकलाई लैजानु उत्तम हुन्छ।
म दोहोर्याउँछु, मेरो बिरालोमा एक फुलेको पेट छ र निर्धारित गरिएको छ र pupate छैन, तर यसले उसलाई भोकै बनाउँछ र उसले के सिफारिस गर्छ खान्छ।
यो सिरका को एक ठूलो चम्मच दिने प्रयास गर्नुहोस्। यसले तपाईंलाई मल त्याग गर्न चाहेको बनाउछ।
यदि तपाईं सामान्य रूपमा खानुहुन्छ भने, तपाईं थोरै कब्ज हुन सक्नुहुन्छ।
मेरो बिरालो सुलेको पेटबाट धेरै नराम्रो छ तर एकदम पातलो, डूबिएको आँखाहरू, पहेंलो बोकेको मूत्र, उनी खान चाहँदैन, उसले केवल थोरै पानी मात्र पिउँछ, मलाई दुखः छ किनभने मैले उसलाई पशु चिकित्सकमा लगिसकें।4पटक अविश्वसनीय पशु चिकित्सक। उनले यो जाँच गरे र उनले मलाई भने कि उनी ठीकै थिए र एक्स इंजेक्सन चौथो चोटि2दिन पहिले उनले मलाई सोमबार उनलाई लैजान भने तर मलाई लाग्छ कि मेरो बिरालो रुन्छन जब ऊ मेरो पक्षमा फर्कन्छ र उसले छोडेको थोरै बलले उसले मलाई हेरी र म आफूलाई बिदाइ गर्ने मन पराउने कोसिस गर्छु, मलाई के गर्ने थाहा छैन, मलाई सहयोग गर्नुहोस्।
तपाईको बिरालोलाई के भइरहेको छ त्यसको लागि मलाई दुखः छ
म तपाइँको पशु चिकित्सक परिवर्तन सिफारिस गर्दछु। जब एक बिरालाले खान चाहँदैन, यो एक खराब चिन्ह हो, र यदि तपाइँको पशु चिकित्सकले ख्याल गर्दैन भने, त्यसोभए दोस्रो रायका लागि सोध्नु उत्तम हुन्छ।
यसलाई टुना वा कुखुराको ब्रोथ पनि दिनुहोस्। र, यदि तपाईं सक्नुहुन्छ भने, वास्तवमै दोस्रो रायको लागि सोध्नुहोस्।
ठिक मेरो बिरालोमा फुलेको पेट छ, उसको पेट बज्दै छ र उसले खान नचाहेको यो days दिनदेखि भइरहेको छ, मलाई डर छ कि यो पीआईफ हो किनकि मेरो बिरालोले दुर्घटना भएको थियो हामीलाई खास कारण थाहा छैन तर पशु चिकित्सकले हामीलाई भन्यो कि यो झगडाको कारणले हुन सक्छ, दौडन वा पस्न सक्छ, उसले आफ्नो पुच्छर अनैच्छिक शौच र मूत्र सार्न सक्दैन।
यो कारण निर्धारण गर्न गाह्रो छ, त्यसैले मेरो रायमा अब के गर्ने भन्ने लक्षणहरूलाई कम गर्न एक उपचार राख्नु हो। केवल पशु चिकित्सकले बताउन सक्दछ कि यदि यो PIF छ, यसको लागि निर्दिष्ट परीक्षणहरू गर्दै।
यो परामर्श गर्नको लागि मसँग एक बिरालाको बच्चा छ एक महिना र आधा हो र उनी दिनमा राम्रो थिए जब सम्म अचानक मैले उसको मुड बदल्दिनँ र उनी मात्र पानी चाहान्छिन् र उनको पेटमा सूजन छ र मैले केही बूढी रगत छोड्दिन मलाई थाहा छ कि यदि ऐनल वा जब मैले पेशाब गरें तर यसले मलाई चिन्ता गर्दछ किनभने मलाई यो एकदम नराम्रो देखिन्छ कि ऊ मसँग चिच्याईन्छ तर मलाई के गर्ने थाहा छैन र उनको पेटले आवाज निकाल्छ !!
यदि तपाईंको बिरालाले रगत बान्ता भयो भने उनलाई संक्रमण वा ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल बिमारी हुन सक्छ। जे भए पनि, पशुचिकित्सकलाई हेर्नु धेरै महत्त्वपूर्ण छ ताकि यो सकेसम्म चाँडो सुधार होस्।
मेरो बिरालाको बच्चा २ महिना पुरानो छ। म उसलाई बूँदाहरूसहित कीर्मी बनाइरहेको छु।भौ दिन अघि मैले याद गरें कि उसले खेल्दा वा धुँदा जब उनी विलाप गर्दछन्, सुन्नु अनौठो हुन्छ।
यदि बिरालाको बच्चाले सामान्य जीवन बिताउँछ भने, सिद्धान्तमा म चिन्तित हुने छैन। कहिलेकाँही यती जवान भएर उनीहरूले केही अनौंठो ध्वनिहरू बनाउँदछन्, तर समयको साथसाथै तिनीहरूले त्यसो गर्न छाड्छन्। जे भए पनि, यदि तपाईले देख्नुहुन्छ कि उसले खराब महसुस गर्न थाल्छ वा यदि तपाईले उसलाई केहि हुन सक्छ भन्ने शंका गर्नुहुन्छ भने, उसलाई निदानको लागि पशु चिकित्सकमा लैजानुहोस्। तर केटा, यदि तपाईं उसलाई तल वा केही देख्नु भएन, यो चाँडै नै सकिने सम्भावना छ।
नमस्कार, करीव days दिन अगाडि मैले सडकबाट करिब २ महिनाको बिरालाको बच्चा अपनाएको थिएँ, मैले उनलाई १२ महिना सम्म बिरालोको खाना खुवाएको छु, तर हिजो पछि उनलाई पेटमा सूजन लागेको छ, उनी सामान्यतया पेशाब गर्छिन् र समान रूपमा दिसापिच्छे, उनी पनि सामान्य खाउँदछ र खेल्छ, तर कहिलेकाहिँ मलाई ऊ सुतिरहेको जस्तो लाग्छ, तर मलाई थाहा छैन यदि यो सामान्य हो किनभने यो सानो छ वा यो अरू नै हो।
तपाईंले बूँदाहरू प्रयोग गर्ने बित्तिकै यो हराउनेछ।
यो सामान्य भन्दा छिटो वा छिटो खाएको हुन सक्छ? कहिलेकाहिँ धेरै वा धेरै चाँडो खाने कुकुरहरूले थोरै फूलेको पेट साथ अन्त गर्न सक्छन्।
अर्को विकल्प यो छ कि तपाईंको शरीर अझै तपाईंको नयाँ डाइटमा बानी भइरहेको छ। जब तपाईंसँग यो days दिनसम्म भएको छ, म सिफारिश गर्दछु कि works-१० दिनहरू यो कसरी कार्य गर्दछ हेर्नुहोस्। यदि ऊसँग अन्य लक्षणहरू हुन थाल्छन्, वा यदि यो खराब हुँदै जान्छ भने, उसलाई पशु चिकित्सकमा लैजानुहोस्। तर सैद्धान्तिक रूपमा यो गम्भीर देखिदैन।
नमस्कार, मसँग or वा month महिनाको बिरालोको बच्चा छ। केही हप्ता पहिले मैले याद गरे कि उनी लामो समय सम्म मेरो पेट चाट्न बसिरहेका थिए, व्यावहारिक रूपमा यो नथुन्जेल। यो सामान्य हो? ऊ बिमारीको कुनै लक्षण देखाउँदैन, ऊ खान्छ र सामान्य खेल गर्छ। धन्यवाद!
Acel लाई जवाफ दिनुहोस्
अत्यधिक चाट कहिलेकाँही बोरियत द्वारा उत्पन्न तनावको लक्षण हो, तर तपाईले के गणना गर्नुहुन्छ भने मलाई लाग्छ तपाईको के हो परजीवी हो। म यसमा बिरालोको लागि पिपेट वा कीटनाशक कलर राख्न सिफारिश गर्दछु।
यदि उसले अझै पनी गर्छ भने, त्यसपछि उसले पशुचिकित्सकलाई देख्नै पर्छ, किनकि पेटमा वा त्यस ठाउँमा थोरै अप्ठ्यारो हुन सक्छ।
मासिएल क्विन्टेरो भन्यो
एक परामर्श, म लगभग करिब दुई र आधा महिना को एक बिरालाको छ र हिजो मैले देखे कि उनले मलाई खोज्दै थिए र ऊ मेरो कोट भित्र पसे मैले उसलाई छोए पछि उसलाई ज्वरो लागेको थियो र मैले उनको पेट छोएँ र ऊ सुलेको थियो र I बुझ्नुहोस् कि उसले शौच गरेको छैन! ऊ कब्जिएको छ किनकि मैले उसलाई शौच गर्ने प्रयास गरेको देखे तर ऊ सकेन र मैले पशु चिकित्सकलाई भने र उनले मलाई उनलाई आधा चम्मच दुध म्याग्नेशिया दिन भनिन्छ किनकि यो रेचकको रूपमा काम गर्दछ। म उसलाई हेर्न आज बिहान उठेँ र उसले अझै गरेको छैन र उसको पेट फुलेको र तातो छ तर ऊ मुडमा छैन तर ऊ मलाई खोज्दै छ किनकि ऊ चिसो छ कि यदि म खान चाहन्न भने!
Massiel Quintero लाई जवाफ दिनुहोस्
यो सिरका को एक ठूलो चम्मच दिने प्रयास गर्नुहोस्। यदि यसले काम गर्दैन भने, फेरि बिहान at बजे दिनुहोस्।
यो एक प्राकृतिक रेचक छ जुन तपाईंलाई आन्द्रा चाल बनाउन सहयोग गर्दछ।
यदि उसले सक्दैन भने, तपाईं उसलाई माल्ट दिन सक्नुहुन्छ। तर यदि यो बिग्रन्छ वा यदि उसले आज र भोलि बिचमा आफैलाई राहत नदिएमा, म तपाईंलाई सिफारिस गर्दछु कि तपाईं उसलाई फिर्ता लिनुहोस् किनभने ऊ हेयरबल खेल्न सक्छ।
नमस्कार शुभ दिन !!
एक परामर्श, म एक महिना र आधा को एक बिल्लीको बच्चा छ, उहाँ सँधै पातलो भएको छ र म उसलाई र सबै कुरा र म कल लगाएको पशु चिकित्सक उनलाई औषधी मा राख्न आए तर रातमा जब उनी उसलाई खाना दिन जाँदै थिएँ मैले याद गरे कि उनको अगाडि खुट्टा र उसको नाडी घुमेको थियो तल झार्नेछ
यसले मलाई चिन्ता गर्दछ ... ऊ राम्ररी खान्छ र मलाई खोज्दछ किनकि ऊ मसँग धेरै संलग्न छ!
यो दुर्लभ छ, तर यो हुन सक्छ कि औषधीले यसको पञ्जामा यसको कारण गरेको हो। यो कुनै पनि मामला मा एक विशेषज्ञ द्वारा पुष्टि (वा अस्वीकार) हुनु पर्छ। तर म तिमीलाई भन्न सक्छु कि यी प्रकारका ड्रग्सले कहिलेकाँही जनावरहरूमा अप्रत्याशित प्रतिक्रिया निम्त्याउँछ।
नमस्कार, चार दिन अघि उनीहरूले मलाई एक वा दुई महिनाको बिरालोको बच्चा ल्याए, उनी पानी पिउँदिनन्, यस्तो लाग्छ कि उनी उनीलाई चिन्दिनन् र यसले उनलाई पहिले डराउँथ्यो, तर अब उनी सुँघेर बसिदिन, उनी धेरै खानेकुराको लागि सोध्छिन्, म उनलाई दिन्छु कि मैले उसलाई केही भाग टुना र कीमालेको मासु दिएँ, मैले उसलाई मासु जैतूनको तेल दिए, मैले उसलाई न्यानो दूध पनि दही र तेलले दूध दियो, पहिलो वा दोस्रो मैले उनलाई खुवाएको बेला उहाँ काम्दै हुनुहुन्थ्यो। मैले याद गरें कि उनीको कडा कडा र फुलेको छ, उनी पेशाब गर्छिन्, तर उनले खास गरी दिसा गर्दिनन् उनले चारै दिनमा मैले मात्र दुई पटक गरेको छु कि म उहाँसँग पहिलो पटक थिएँ, पहिलो पटक म उपस्थित थिइनँ, त्यो दुई थियो दिन अगाडि र दोस्रो आज थियो, जब उनले यो गरिरहेकी थिई उनी रोई र स्पष्ट रूपमा यसलाई खर्च गर्न यसको गन्ध आयो, गन्ध धेरै कडा थियो र यो बिरालो पपको गन्धको जस्तो गन्ध थिएन, यदि तपाईले म के भनिरहेछु भने, र रंग धेरै गाढा थियो र त्यो नोटिस गरेपछि उनको पेट कम सूजन भएको थियो। हर्मायोनी एकदम सक्रिय बिरालोको बच्चा हो, उनी दौडिन र खेल्छिन् र जिज्ञासु छिन्, उनी खाउँछिन्, पेस गर्छिन्, कुदाई र खेलउँछिन् र केही बेर सुत्न थाल्छन् र दिन बित्दछ, जब उनीहरूले मलाई ल्याए उनीहरूले मलाई भने कि उसले भर्खरै मासु खाएको थियो। बिट्टन र गरिब कुरा, सुपर डराएको र नर्भस हुनुको अलावा, उनी पहिले नै कडा र फूलेको पेटको साथ आईन्, उनको पनि भाँचिएको पुच्छर वा कम्तिमा चोट लागेको जस्तो देखिन्छ कि ऊ थोरै शान्त भई केही आत्मविश्वास प्राप्त गरिन। उनको तातो दुध तर एक सानो किनभने न त म यो सबै ले मलाई थाहा छैन यदि मैले उसलाई दूध दिन छोड्नु पर्छ वा मलाई दूध दिइरहनु पर्छ र टुना र मासुको साथ बन्द गर्नु पर्छ, मलाई थाहा छैन उसलाई कसरी पानी पिउने भनेर।
पानी पिउन, म उसलाई कुखुराको ब्रोच, वा बिरालाहरूका लागि क्यान दिन सिफारिस गर्दछु। तपाईं उसलाई सिरिन्ज (सुई बिना), वा बोतलको केही पानी पिउन "बल" गर्न सक्नुहुन्छ; अलि अलि अलि ऊ त्यो बानी हुन्छ।
उसलाई शौच गर्न, उसलाई सिरका को एक बड़ा चम्चा दिनुहोस्। सिरका रेचकको रूपमा कार्य गर्दछ।
र यदि यो अझै सुधार भएको छैन, वा यदि यो बिग्रेको छ भने, उनलाई एक परीक्षाको लागि पशु चिकित्सकमा लैजानुहोस्।
नमस्कार हामी धेरै चिन्तित छौं। ड्यूक साढे चार महिना एक फारसी ट्याब्बी हो जसले एक हप्ता अघि सम्म राम्रो गरिरहेको थियो हामीले थाहा पायौं कि ऊ एकदम सुलेको पेट थियो। पानीले भरिएको बेलुन जत्तिकै पेटलाई छोएमा यसले अनुभूति प्रदान गर्दछ। एक्स-रेमा तपाईले केहि देख्न सक्नुहुन्न, यो सबै सेतो दाग हो, तपाई अ the्गहरू देख्न सक्नुहुन्न, तरल पदार्थको मात्राको कारणले। यो फिडको परिवर्तनसँग मिल्दोजुल्दो छ, यो उही ब्राण्डबाट हो तर यसको उमेरमा अनुकूलित। रक्त विश्लेषण पनि अनियन्त्रित प्यारामिटरहरू देखाउँदछ। उसले आफ्नो भोक गुमाएन, ऊ अब नरम डाईटमा छ, तर उसलाई पखाला लाग्छ। तरल को यो राशि को कारण हुन सक्छ?
यद्यपि उसले खान्छ, ऊ कुनै पनि चंचल हुँदैन।
म ड्युक to लाई के हुन्छ भनेर दु: खी छु
निदान केवल पशु चिकित्सक द्वारा गर्न सकिन्छ। मेरो विचारमा यो संक्रमणको कारण हुन सक्छ। तर मँ तपाईंलाई पहिले नै भन्दछु, यो पशु चिकित्सकद्वारा जाँच गर्नु उत्तम हुन्छ।
सहयोगी chagoya भन्यो
नमस्कार, कृपया मलाई कुन बिनी दिनुहोस् मेरो बिरालो, स्याउ, मदिरा, वाइन वा अरू केहि दिऊँ किनकि उसले शौच गरेको छैन र म उसलाई मद्दत गर्न चाहन्छु।
तपाईको ध्यानाकर्षणको लागि धन्यबाद, न्यानो अभिवादन।
सहायता चागोयालाई जवाफ दिनुहोस्
तपाईं यसलाई वाइन दिन सक्नुहुन्छ, तर म तपाईंलाई फेरी एक सिफारिस गर्दछु।
नमस्ते! मलाई बिरालोको बारेमा धेरै थाहा छैन। एक हप्ता अघि मैले सडकमा एक जुवाको अ den्क उठायो, उसलाई पखाला लागेको छ किनभने उसलाई मसँग छु, उनी धेरै खाए, धेरै पानी पिए, उनले गुनासो गरे र उनको कपालमा दाग लागेको छ, पहिलो दिनमा मैले उनलाई लगे पशु चिकित्सक, उनीहरूले उनलाई कीरा बनाए, भिटामिन दिए, इत्यादि। तर उसलाई अझै पखाला नै छ, म उनलाई फेरि लिएर गएँ र ऊ एन्टिबायोटिकमा छ, मलाई लाग्छ कि यो परजीवीको कारणले हुन सक्छ र मेरो छोरा चिन्तित छ कि उसले बिभिन्न बिरालाको बच्चाले सबै चीज दाग लगाएपछि केही हासिल गर्न सक्छ। उसको पंजा, त्यो हो? र यो कत्तिको गम्भीर हुन सक्छ?
यास्नालाई जवाफ दिनुहोस्
सडकबाट आउँदैछ, यस्तो धेरै सम्भावना हुन्छ तपाईंसँग आन्तरिक परजीवीहरू छन्। के उनीहरूले तपाइँलाई पिल जस्तै पनी हटाउन केहि दिए?
यो गम्भीर छ, किनभने पखाला भएकोले तपाईंले तरल पदार्थ र खनिजहरू गुमाउँदै हुनुहुन्छ। राम्रो कुरा त्यो हो कि उसले खान्छ र पिउँछ। जे भए पनि, म तपाईंलाई सिफारिश गर्दछु कि तपाईं उसलाई स्टूल नमूनाको साथ पशु चिकित्सकमा फिर्ता माइक्रोस्कोप अन्तर्गत जाँच गर्न। यो तपाईको आन्तरिक परजीवीहरू छ वा छैन भनेर जान्न सब भन्दा छिटो तरीका हो।
त्यहाँ बिरामीहरू छन् जुन बिरालाहरूले हामीलाई परजीवीहरू मार्फत सार्न सक्छन्, त्यसैले तिनीहरूलाई टेबुल, कुर्सी र ओछ्यानमा चढ्नबाट रोक्न धेरै महत्त्वपूर्ण छ, र तपाईंले पनि आफ्नो हातहरू राम्ररी छुनु पर्छ।
शुभ - प्रभात…। करिब दुई महिना अघि मैले एउटा बिरालोको बच्चालाई अपनाए जुन आज months महिना पुरानो हो ... उनीहरूले उसलाई खोप लगाएर मलाई कीरा लगाए, तर उसको पेट फुले, पछिल्लो रात एउटा फ्या out्ग बाहिर प and्यो र मैले महसुस गरे कि उनको कुकुरहरू खुल्दै छन्। अन्त ... म धेरै चिन्तित छु
सैद्धान्तिक रूपमा, फ्या that बाहिर पसेको हुन सक्छ दुध दाँत, किनभने केही बिरालाहरूले वयस्कको साथ बच्चाको दाँत बदल्न केही समय लिन्छ; तर यो कमजोर प्रतिरोध प्रणाली जस्तै अझ गम्भीर कुराको संकेत पनि हुन सक्छ।
नेल चीज फg्गसको कारणले हुन सक्छ, तर निश्चित रूपमा जान्नको लागि, म तपाईंलाई सल्लाह दिन्छु यसलाई पेशेवर लिनका लागि।
अल्बा लिगिया भन्यो
नमस्कार, मेरो बिरालाको बच्चामा c बिरालाहरू थिए र मैले याद गरे कि उनको पेट सुजनिएको छ। उनी खान्छिन् र purrs तर म उनको पेट को बारे मा चिन्ता गर्छु।
अल्बा ligia लाई जवाफ दिनुहोस्
क्यामिलो एकुआ भन्यो
म जान्न चाहन्छु कि मेरो बिरालोको बच्चा एकदम पातलो र सूजनको अनुभूति भएको छ जुन एक बलून जस्तो देखिन्छ जो फुले र डिफ्लेट्स हो, र एक क्षण देखि अर्को उनी धेरै पातली छिन्, मलाई यो जान्नु आवश्यक छ कि मेरो बुढी महिलाले उनलाई के माया गर्छे र हामी जान्न चाहँदैनौं कि ऊ मर्नेछ। म तपाईंको प्रतिक्रियाको लागि हेर्दै छु!
Camilo Acuña लाई जवाफ दिनुहोस्
माफ गर्नुहोस्, तपाईंको किट्टी kit लाई के हुन्छ भनेर
म तपाईंलाई सल्लाह दिन्छु कि उनलाई जाँचको लागि पशु चिकित्सकमा लैजाऊ। तपाईलाई के गलत छ र यसलाई कसरी व्यवहार गर्ने भन्ने कुरा उसले तपाईलाई बताउनेछ।
म पशु चिकित्सक होइन, र म तपाईंलाई यसका साथ मद्दत गर्न सक्दिन। मलाई लाग्छ कि उसले आफूले नचाहेको चीज निल्यो, र त्यो त्यस्तो कारण हो जुन यी लक्षणहरू हुन्, तर वास्तवमै उसलाई के हुँदैछ भन्ने कुरा एक पेशेवरले मात्र चिन्न सक्छ।
नमस्कार, शुभ दिउँसो, मलाई आशा छ तपाईंले जवाफ दिन सक्नुहुन्छ, मलाई आग्रह गर्नुहोस् !! बाहिर जान्छ कि मसँग एउटी बिराला छिन भनेर उनको आमाले परेको छ किनकि जीवनको हप्ता अब २ महिनाको भयो, म उनको जाँच गर्न १ days दिनमा उनलाई पशु चिकित्सकमा लगें र उनले मलाई मात्र भनिन् कि उनको हाइपोथर्मिया छ, मैले उनको सूत्र दिएँ र अब उनी बिरालाको बच्चा गोली पिल्पी खाउँछिन् र सुन्दर राम्रो पानी पिउँछिन्। मेरो समस्या यो हो कि उसको पेट सधैं सुगन्धित रहेको छ र करिब दुई हप्ता अघि मैले उसलाई एन्टिपेरासिटिक ड्रप दिएका थिए र आजदेखि उसले मृत गँड्यौलासहित गुलाबी तरललाई भोट दिन्छ। म के गरौ? अब मसँग पशु चिकित्सकलाई लिनको लागि पैसा छैन, कृपया मलाई मद्दत गर्नुहोस् !!!! मलाई चिन्ता छ कि यदि उनीले पहिले नै उनको मृतलाई भोट गरिरहेकी छिन र ऊ अलि अलि बढी पातलो हुँदै गएको छ। धन्यवाद
यदि तपाईं बान्ता गर्दै हुनुहुन्छ भने यो राम्रो संकेत हो। उसलाई पानी र कुखुराको ब्रोथ दिनुहोस् - एक नाजुक पेटको साथ, नरम आहार पछ्याउनु राम्रो हुन्छ- र जब ऊ बान्ता गर्दैन, तब तपाईं उसलाई फेरि आफ्नो फिड दिन सक्नुहुन्छ।
रिचर्ड रामिरेज भन्यो
मँ नमस्कार, शुभ अपरान्ह, मसँग एउटा प्रश्न छ, मसँग एक सानो बिरालोको बच्चा पनि छ, उसको पानसिता फुलेको छ र उसको खुट्टा पनि फुल्न थाल्छ र यो मेरो बिरालोबाट एक अर्कामा जान्छ, तिनीहरूले मलाई भन्छन् धन्यबाद: '(
रिचर्ड रामीरेजलाई जवाफ दिनुहोस्
यो सम्भव छ कि केहि तपाइँले एक एलर्जी दिएको छ र त्यसैले तपाइँको शरीर त्यो तरीकाले प्रतिक्रिया गर्दछ। जे भए पनि, पशु चिकित्सकले उसलाई देख्नु पर्छ।
नमस्कार शुभ रात्री, म केहि सोध्न चाहान्छु
मसँग १०-महिना पुरानो सेन्ट्री बक्स छ र उसको पेट र अनुहार सूजन भएको छ। बिहान ऊ ठीक थियो तर अहिले उनी एकदम शान्त छिन र बाहिर निस्कन चाहन्न, उनी के हुन्छ ???
एरियडनालाई जवाफ दिनुहोस्
यो हुन सक्छ कि उसलाई कलेजोको सूजन छ, तर त्यो केवल एक पशु चिकित्सा पेशेवर द्वारा पुष्टि वा अस्वीकार गर्न सकिन्छ।
Noelia Taquichiri भन्यो
नमस्कार, तपाई कस्तो हुनुहुन्छ? ... मेरो बिरालाको २ दिनसम्म फुलेको पेट छ, ऊ तल छ किनकि ऊ अब खाँदै छैन तर उसले थोरै पानी पिई। केहि दिन अघि उसको घाँटी दुखाइ भएको थियो, किनभने उसले हार्स मेयोस उत्सर्जित गर्‍यो र बान्ता गर्ने बानी भयो तर बान्ता गरेन। अब उनको पेट फुलेको छ। हामी सबै धेरै चिन्तित छौं, तपाईलाई के लाग्छ? …। अभिवादन र धेरै धेरै धन्यबाद।
Noelia Taquichiri लाई जवाफ दिनुहोस्
म तपाईंलाई सिफारिश गर्दछु कि तिमी उसलाई पशु चिकित्सकमा लैजाऊ, किनकि बिरालोले eating दिन भन्दा बढि खाना खान बिना जान सक्दिन (यदि उसले थाली, उसको अंगहरूले राम्रोसँग काम गर्न रोक्न सक्दछ)।
माफ गर्नुहोस्, म तपाईंलाई अधिक मद्दत गर्न सक्दिन। आशा छ ऊ चाँडै निको हुनेछ।
नमस्कार, शुभ अपरान्ह, मैले सडकमा एउटा बिरालोको बच्चा भेट्टाँ र पशु चिकित्सकले मलाई भन्यो कि ऊ करिब तीन हप्ताको छ, म उसलाई बिरालोहरूका लागि विशेष चूर्ण दूध दिन्छु, ऊ राम्रोसँग खान्छ, त्यसले नुहाई आधा पानी पार्छ, तर उसको पेट मात्र छ म उसलाई गर्न उत्तेजित गर्दा धेरै फुलाएको छ। उसले बाथरूमबाट ग्यास निकाल्छ, मँ बढेको सुगन्धित सामान हटाउन के गर्न सक्छु - मलाई थाहा छैन ऊसँग धेरै हावा छ कि छैन, पशु चिकित्सकले मलाई थोरै नुन अpes्गुर दिन भन्यो। ग्यासहरू काट्न पानीमा, मैले यो गरिसकेको छु तर मलाई लाग्छ कि यसले काम गरेको छैन किनकि यो अझै समान छ तर उसले मलाई भन्छ कि यो कीराउन सक्दैन किनकि यो एकदम सानो छ, म गर्न सक्दछु।
म उनको सानो चम्चा (मिठाइका लागि) स्याउ साइडर सिरकाको साथ पानी दिन सिफारिस गर्दछु, किनकि यसले उनको पेट सफा गर्न सक्छ। तर यो उत्तम छ कि तपाईंले पहिले आफ्नो पशु चिकित्सकलाई परामर्श लिनुहोस्, किनकि तपाईंले स्व-औषधि लिनु हुँदैन वा कुनै उपचार गर्नु हुँदैन यदि हामीलाई थाहा छैन कि यसले तपाईंलाई नराम्रो महसुस गराउन सक्छ वा सक्दैन।
हेलो राम्रो रात .. मलाई थाहा छ यो ढिलो भयो तर मलाई आशा छ कि तपाईं तुरून्त जवाफ दिन सक्नुहुन्छ। मेरो १ र १ year वर्षको बिरालोलाई शनिबार पिसाब गर्न कठिनाई भएको थियो, हामी उसलाई पशु चिकित्सकमा लग्यौं र उनीहरूले उनको मूत्राशय खाली गर्न एक क्याथेटर राखे र तिनीहरूले उसलाई एन्टिबायोटिक दिए। सोमबार उनीहरूले यसलाई बाहिर लगे र मैले सोचे कि ऊ निको हुन जाँदैछ तर आज उसलाई फेरि समस्या भयो र रगत बग्यो जब उसले झुत्रो फुलेको थियो र उसले शौच नगरेको थियो र ऊ एकदम फुलेको, क्षय भएको र धेरै मांसपेशिमा छ, म हुँ। बिहान उसलाई पशु चिकित्सकको लागि बिहान सब भन्दा लिन जाँदैछु तर मलाई थाहा छ यदि कसैलाई यो के हुन सक्छ केहि विचार छ कि छैन, र यदि केहि छ भने म उसको पीडा कम गर्न वा उसलाई कुनै आवश्यकता पूरा गर्न सहयोग गर्न सक्छु। धेरै पहिले नै धन्यबाद। म धेरै चिन्तित छु मलाई आशा छ यो भोली आईपुग्छ।
मलाई थाहा छैन यदि तपाईं उसलाई पशु चिकित्सकमा लगिसक्नु भएको छ कि छैन, तर मलाई अझै लाग्छ कि उसलाई ठूलो मूत्र संक्रमण हुन सक्छ। तर पशु चिकित्सकले तपाईंलाई के भन्छ हेर्नुहोस्।
नमस्कार, म करीव months महिनाको बिरालाको बच्चा हुँ, म मेरो धर्मपुत्र परिवारसँग डेढ महिना बाँचिरहेछु। म धेरै स्वस्थ छु, म खेल्छु, खानेछु, मैले भने र म सामान्य रूपमा बाथरूममा जान्छु; यद्यपि मसँग एक उन्माद छ जुन लगभग weeks हप्ता अघि शुरू भएको थियो, म मेरो पेट जबरजस्ती चाट्छु, विशेष गरी म मेरो निप्पल्समा मेरो आमाबाट दुध पिउने दूध पिउँदछु। मेरो परिवारले मलाई खेल्नबाट अलमल्याउने कोशिश गर्दछ ताकि म बानीलाई निरन्तरता नदिनुहोस्, सुरुमा यसले कार्य गर्‍यो तर अब म तिनीहरूलाई उपेक्षा गर्छु र म आफैंलाई चुस्दैछु। मैले याद गरें कि जब म કંबोर छु वा जब म धेरै सहज छु। म १ days दिन अगाडि कीरामा परेको थिएँ। कृपया सहयोग गर्नुहोस्! धन्यवाद!
एक प्रभावकारी तर कष्टकर उपाय भनेको बिरालाको टी-शर्ट लगाउनु हो। तर यो एक्लो पर्याप्त हुनेछैन, तर यो पनि आवश्यक छ कि तिनीहरूले तपाईंलाई मिठाइहरू वा केहि खानेकुराका साथ ध्यान विचलित गरे जुन उनीहरूले तपाईंलाई धेरै मन पराए। त्यो उमेरमा तपाइँले धेरै खेल्नु पर्छ।
मलाई लाग्दैन कि यो त्यो भन्दा गम्भीर छ: मात्र बोरडम वा तनाव। तैपनि, र यदि तपाइँ केही समय पछि सुधार गर्नुहुन्न भने, तिनीहरूलाई पशु चिकित्सकमा लैजानु भन्नुहोस्, किनकि त्यसो भए यसले एलर्जी वा केही dermatological समस्याको बारेमा कुरा गर्न सक्छ।
लौरा पुरुष भन्यो
नमस्कार शुभ दिन
यो मेरो बिरालो7महिनाको छ र यो हो कि म उसको पेट सुगन्धित भएको देख्छु तर ऊ आफ्नो भोक गुमाउँदैन।
लौरा पुरुषलाई जवाफ दिनुहोस्
उसले धेरै खाएको हुन सक्छ, वा ऊ आन्द्रा परजीवी हुन सक्छ। रोकथामको लागि, म पशु चिकित्सकमा जान सिफारिस गर्दछु।
क्लेरीबेल आर भन्यो
नमस्कार, मैले लगभग १ days दिन अगाडि एउटा बिरालाको बच्चा अपनाएको छ जुन लगभग २ महिना भइसक्यो, यसको धेरै फ्लाईहरू थिए जसलाई मैले हटाए। सामान्य खेल्नुहोस्, राम्रो खाउनुहोस्, सामान्य पिउनुहोस्, तपाईंको सामान्य आवश्यकताहरू गर्नुहोस् बाहेक यो केही दिनसम्म पखालासँग भयो जुन मैले उनलाई घीनलाग्दो पारेको छ, उसलाई लामो समयदेखि पखाला छैन। तर दुई दिन अघि उनको पेट बदलिएको छ। यो ग्यास वा केहि गम्भीर छ?
Claribel R. लाई जवाफ दिनुहोस्
कीरा लाग्ने बित्तिकै तपाईंको पेट अलिकति चिढचिलो हुन सक्छ। मलाई लाग्दैन कि यो केहि गम्भीर कुरा हो, तर यदि यो खराब हुँदै जान्छ भने, म उनलाई सिफारिस गर्दछु केवल पशु चिकित्सकमा लैजाने मामलामा।
नमस्कार शुभ रात्री, म करीव years बर्षको बिरालो छ र ओसिलो दिनको कारण, हामीले सोच्यौं कि त्यसले चिसो लागेको छ किनकि उसले धेरै छींकने प्रक्रियाबाट शुरू गरेको थियो, हामीले उसलाई डाक्टरमा लग्यौं र उनीहरूले भने कि यो थियो। चिसो होइन, तर जे भए पनि उहाँ एक पेन्किललर दिनुहुन्छ अर्को दिन हामी उनलाई फिर्ता लिन लाग्यौं ऊ बिग्रँदो हुँदै गइरहेको थियो, ऊ सास फेर्दै सास फेर्दै थियो, घुसिरहेको थियो र केवल लार मात्र मतदान गर्दै थियो, यसबाहेक उसको मुखबाट यो सास फेर्न थाल्यो। आज हामीले उसलाई फिर्ता लियौं र पशु चिकित्सकले हामीलाई भन्यो कि यो पाइथोर्याक्स हुन सक्छ कि मेरो बिरालोको बच्चाले त्यस्तै छ, उनले भने कि उनले उसलाई कर्टिकोस्टेरॉइड दिनुहुन्छ र यदि त्यसले यो खराब बनायो भने किनभने त्यो पाइयोथोरक्स थियो। बिरालो धेरै राम्रो सास फेर्न सक्छ तर अब आफ्नो पेटको क्षेत्र मा सूजिएको छ र अझै पनी gagging छ। म साँच्चिकै निराश छु, म के गर्न सक्छु, यसले के गर्दछ?
उसलाई कुखुराको ब्रोथ (हड्डीविहीन) खान दिनुहोस्, र यति कमजोर महसुस नगर्नुहोस्।
म तपाईंलाई सिफारिश गर्दछु, यदि तपाईको पशु चिकित्सकले यो आवश्यक छ भन्ने सोच्दछ भने, उसलाई आन्तरिक परजीवीहरु को लागी एक गोली दिन को लागी, किनकि कहिलेकाँही एक दाहिने पेट क्षेत्र को परजीवी को एक लक्षण हो।
कृपया, मलाई मद्दत चाहिन्छ, मेरो सेन्ट्री बक्सले days दिनसम्म खाएको छैन र ऊसँग अब कुनै शक्ति छैन, म उसलाई केवल सीरम दिन्छु तर ऊसँग केही पनि शक्ति छैन र ऊ केवल दिनभरि सुतेर बस्छ र फोहोर बक्समा जान सक्दैन। !!! तिनीहरूले उसलाई १aदिनसम्म औषधी लगाई दिए तर म कुनै सुधार देखिन, कृपया मलाई केही सल्लाह दिनुहोस् !! सत्य यो हो कि मसँग पशु चिकित्सकमा लैजाउन पनि पेसो छैन, उनीहरूले धेरै शुल्क लिन्छन्! जोस मद्दत गर्ने
तिमीले खानु पर्छ। उहाँलाई सिरिंज (सुई बिना), वा बिरालो प्याटका साथ पनि कुखुराको ब्रोथ दिने प्रयास गर्नुहोस्।
म तपाईंलाई सिफारिस गर्दछु कि तपाईं जनावरहरूको आश्रय खोज्नको लागि उनीहरूले तपाईंलाई मद्दत गर्न सक्दछन् किन्न, किनभने पशु चिकित्सकहरूले उनीहरूलाई विशेष मूल्य दिन्छन्।
नमस्कार, हामीले केही सडक बिरालाहरू अपनाएका छौं, ती करीव एक महिनाको छन्। हामी उनीहरूलाई गाईको दूध पानीले सपाट पार्छौं र रोटीको साथ चुर्लुम्मै डुबाउँदछौं, हिजो देखि उसको सुजनिएको पेट भएको छ र सूचीहीन छैन, साथसाथ। तिनीहरू एक पन्ध्रौं पहिले ड्रपको साथ कीराण गरिएको थियो। के हामी डाक्टरमा फर्कनु पर्छ? धन्यबाद
Esquibel लाई जवाफ दिनुहोस्
सबैभन्दा पहिला, परिवारका नयाँ सदस्यहरूलाई बधाई छ 🙂
म तपाईंलाई सिफारिश गर्दछु कि तपाईं उनीहरूलाई रोटी दिन रोक्नुहोस्, किनकि यो त्यस्तो भोजन हो जुन उनीहरूलाई साचो नै आवश्यक पर्दैन र यसले तिनीहरूलाई नराम्रो महसुस गराउन सक्छ। एक महिनाको साथ तिनीहरूले भिजेको बिरालोको खाना खान शुरू गर्न सक्छन्।
जे भए पनि, हो, यसलाई रोक्नको लागि राम्रो छ तपाईंले यसलाई पशु चिकित्सकमा लैजानुहोस्। केवल केसमा केहि भन्दा बढि, किनकि यो मात्र हुन सक्छ कि रोटी राम्रोसँग बसेको छैन, तर यो अझ खराब हुन सक्छ।
मैरीरी पाल्मा भन्यो
मेरो बिरालाको बच्चा months महिना पुरानो छ, उनी एक दिन भन्दा बढी अज्ञात भइन् र जब हामीले उनलाई खोज्न थाल्दा मैले उनलाई घरमा रहेको लॉरेल रूखमा भेट्टाएँ, मलाई लाग्छ कि उनी कसरी तल जानुपर्दैन, किनभने उनको नाम थियो मउनिowing्ग, शीर्षमा, मैले उसलाई तान्नुपरेको थियो र उनको पञ्जालाई तान्नु बाहेक अरू कुनै विकल्प थिएन, तर उनको आँखामा मैले निराशता देखाएको थिएँ, ऊ हिंड्न चाहन्न, ऊ दिनभर सुतिरहेकी छ, ऊ यो गर्दिन। ' टी केहि खान चाहन्न, ऊ आफ्नो मुख खोल्दिन र जब म उसलाई बच्चा जस्तो बोक्छु वा अलि निचोरेको हुन्छ, उसले धेरै देखाउँछिन् र हिजो जब मैले दुर्घटनावश निचो पारें, यसले धेरै पीड गर्यो, तर त्यो के हो 'पशु चिकित्सकमा जान पैसा छैन र मसँग १ वर्ष र months महिना भन्दा बढीको बिरालाको बच्चा छ र उसले सधैं मेरो नुहाइरोलाई नुहाएर चाट्यो तर आज उसले उनलाई गन्ध दियो र सुरु गर्यो ... म के गर्न सक्छु
मेरीओरी पाल्मालाई जवाफ दिनुहोस्
म तपाईंको बिरालोको happened लाई के भएकोमा धेरै दु: खी छु
म कुनै पशुचिकित्सकले देख्नको लागि मद्दतको लागि पशु आश्रय वा आश्रय सोध्न सिफारिस गर्दछु। यो आवश्यक छ।
बिरालो जुन खान चाहँदैन र दु: खी र सूचीहीन छ, धेरै गम्भीर कुरा यो हुन सक्छ। त्यो तथ्य? मलाई थाहा छैन। हुनसक्छ ऊ आफैंले नचढेको कुराले घुस्यो, हुनसक्छ ऊ पसे र आन्तरिक रूपमा आफैलाई चोट पुर्‍यायो, मलाई थाहा छैन; तर यदि days दिन भन्दा बढि जान्छ र तपाईंले खानु हुन्न भने, तपाईंको स्वास्थ्य खस्कन्छ।
शुभ दिन दिउँसो, मेरो गार्डहाउस weeks हप्ताको छ, उसको पेटमा सुगन्ध छ र उसले धेरै खाँदैन, ऊ धेरै पानी पिउँछ, उसको भुँडीको चमक हराएको छ र अब यो गरिसकेको छैन र ऊ धेरै सुतेछ र ऊ गर्दैन पहिले जस्तै खेल्नुहोस्।
म शीला हुँ
शीलालाई जवाफ दिनुहोस्
जब बिरालाले धेरै पिउँछ र धेरै कम सक्रिय हुन्छ, यो मधुमेह हुन सक्छ।
मेरो सुझाव छ कि तपाईं उनलाई सकेसम्म चाँडो पशु चिकित्सकमा लैजानुहोस्।
मटियास सालिनस सिल्भा भन्यो
नमस्कार, मेरो बिरालोको साथ मसँग निम्न समस्या छन्।
मितिदेखि मेरो बिल्लीले यसको पञ्जामा सूजन प्रस्तुत गर्न शुरू गर्यो। सुरुमा तिनीहरू सबै, त्यसपछि तिनीहरू सूजन मा तल गए र अब कहिलेकाँही यसको पछाडि खुट्टा दन्किन्छ।
आज ऊ आफ्नो सानो अनुहारको एकपट्टिबाट उठ्यो र उसको पेट पनि फुलेको र कडा भयो।
के तपाइँ मलाई मार्गनिर्देशन गर्न सक्नुहुन्छ?
मटियास सालिनस सिल्वालाई जवाफ दिनुहोस्
यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईंले उसलाई पशु चिकित्सकमा लैजानुहुन्छ, किनभने यस्तो हुन सक्छ कि उसलाई एलर्जी वा अझ गम्भीर रोग लागेको छ जसलाई पेशेवरले पत्ता लगाउनु पर्छ।
नमस्कार, मैले सडकबाट एउटा बिरालोको बच्चालाई बचायो जुन स्पष्टतः उत्पादनको रोग वा केही चीज छ किनकि उनी6महिनाको बिरालोको आकार हुन् तर वयस्क अनुहार छ र लगभग १ वर्ष १ year वर्ष पुरानो छ। उसको कमजोरीका कारण कपालको अभाव छ, हरियो पखाला र कम वजन थियो, अलि अलि गर्दै उसले तौल पुनः प्राप्त गर्‍यो, उनको पखाला सुधार भएको छ र अब यो नरम खैरो छ, उसको कपाल अझै समान छ तर उसको पेटको आकारले मेरो ध्यान खिचेको छ।एक दिन अर्कोलाई र यो विशाल छ !! यो के हुनेछ?
किम्बरलीलाई जवाफ दिनुहोस्
सडकबाट संकलित बिरालाहरूमा पखाला प्राय: परजीवीहरूको कारण हो। अन्य लक्षणहरू यी अवांछनीय भाडाहरूबाट हुन सक्छ।
म उसलाई कीराको लागि गोली दिन सिफारिस गर्दछु, जुन उनीहरू पशु चिकित्सा क्लिनिकमा बेच्छन्।
यदि यो अझै सुधार हुँदैन भने, यो एक पेशेवर द्वारा देख्नु पर्छ।
मेरो बिरालासँग उसको झोलामा धेरै फ्याट छ तर म यसलाई मेरो छिमेकीको साथ तुलना गर्छु र यसले तौल गर्दैन। त्यसको वजन सिसा भन्दा बढी हुन्छ तर यसमा पेट हुँदैन। मेरो तौल गर्दैन तर ऊ वयस्क भए पछि उसको सानो झोला छ। र मैले भर्खरै एक कप प्रीमियम ड्राई फूडको दिनमा एक कप दिएँ, कहिलेकाहिँ भिजेका हुन्छन् र ऊ सिढीबाट तल जान्छन् जुन खान पर्याप्त छ, बाथरूममा जान, सुत्न म उनी र उसको चूहोंसँग खेल्छु, तर यो पेट मात्र फ्लिप गर्दछ। , एक बाट अर्को छेउमा फ्लप। मलाई थाहा छैन म के गरु
Sheilatavarez लाई जवाफ दिनुहोस्
म पशु चिकित्सकलाई लिन सिफारिस गर्दछु। तपाईंसँग केहि पनि नहुन सक्छ, तर यस्तो हुन सक्छ कि तपाईं तरल पदार्थलाई कायमै राख्दै हुनुहुन्छ, जसले किडनी विफलता निम्त्याउन सक्छ।
यसलाई पास हुन नदिनुहोस्।
विलियम सान्चेज भन्यो
नमस्ते काग मोनिका,
तीन हप्ता अघि मैले सडकबाट डेढ बर्षे बिरामीलाई धर्मपुत्र बनाएको थिएँ र उनलाई ल्यूकेमियाको परीक्षण गर्दा यो सकारात्मक थियो र ऊ केही बिरामी परेको छ, धेरै फेभरहरू, ऊ राम्ररी खाँदैन र हामीले बिभिन्न खाद्य पदार्थहरू खोजेका छौं। ऊ कुकुर संग बसिरहेको छ। करीव days दिनदेखि उनी खान खाने इच्छा बिना थिए, उनले धेरै पानी पिए र ओछ्यान जस्तो स्थानमा पेशाब गरे, ऊ एकदम पातलो छ तर उसको पेट फुलेको छ, जुन हरेक दिन धेरै बढिरहेको छ।
म के गर्न जान्न चाहान्छु? म बिरालोहरूको विशेषज्ञ हुँईन र मलाई थाहा छैन यदि यो साथीले पहिले नै अत्यन्त दु: ख भोगिरहेको छ, ऊ उफ्रनु नै कठिन छ, ऊ खाना लिन चाहँदैन र ऊ बालुवाको बोक्रा बाहिर बाहिर घुम्दैछ, मलाई थाहा छैन यदि यो अवस्था छ भने कुकुरलाई असर गर्छ। म कागजात के गर्छु? मैले धेरै पढेको छु र मलाई थाहा छ कि यस रोगको कुनै ईलाज छैन, तर मलाई थाहा छैन बिरालालाई के भइरहेको छ यसले धेरै दु: ख भोगिरहेको छ।
विलियम सान्चेजलाई जवाफ दिनुहोस्
सबै भन्दा पहिले, म एक डाक्टर होइन, त्यसैले म तपाईंलाई दिन सक्ने सल्लाह कुनै पनि मामला मा एक पेशेवर को राय प्रतिस्थापन गर्दैन।
म तपाईंको बिरालाको बच्चालाई के हुन्छ भनेर धेरै दु: खी छु, तर मलाई लाग्दैन समाधान यो सुत्नु हो। मलाई थाहा छैन, म तपाईंलाई परिस्थितिमा आफैंले हेर्नुपर्दछ जस्तो लाग्छ, तर मलाई लाग्छ पशु चिकित्सकले यो प्रयास गर्नुपर्दछ।
बिरूवा ल्यूकेमिया संक्रामक छैन। के हुन सक्छ कि कुकुरले बिरालोको बच्चालाई देखेर नराम्रो लाग्यो, उसको साथीलाई।
इवान भेगारा भन्यो
नमस्ते, म चाहन्छु कि मेरो बिरालोमा के गम्भीर छ।
आज राती मैले थाहा पाइन कि उनको पेट फुलेको र बैजनी हो र हरेक चोटि मैले उनलाई छुँदा उनको पेट दुख्छ। ठीक छ, पछिल्लो रात देखि उहाँ फुलेको छ, तर उहाँको बैजनी पेट कुनै अप्ठ्यारो देखाएन। उसले आफ्नो गतिविधिहरू (खाने, पिउने, दिसा गर्ने, पेशाब गर्ने आदि) गर्दछ, सामान्यतया हिजो भन्दा उसले हिजो राम्रो खाएको थिएन, र उसले रगतले (शौच) पनि गर्‍यो। तर आज उसले राम्रो महसुस गरे र सामान्य कुरा गरे। यो खराब छ?
Iván Vergara लाई जवाफ दिनुहोस्
यो हुन सक्छ कि तपाईंसँग माइक्रोबियल असंतुलन छ, जुन एन्टिबायोटिकको साथ उपचार गरिन्छ।
अर्को सम्भावित कारण गम्भीर बिमारी हुन सक्छ, तर म यसमा धेरै शंका गर्दछु यदि हिजो यो राम्रो थियो र आज यो झन् खराब भएको छैन भने।
जे भए पनि, पशु चिकित्सकलाई भ्रमण गर्न पैसा तिर्ने छैन। उसलाई थाहा हुन्छ कि उसको आफुसंग के छ र कसरी उसलाई राम्रो बनाउनु पर्छ।
नमस्कार, मेरो बिराला करीव २ महिना पुरानो छ, मैले उसलाई सडकमा उठाएँ, उनी सुपर थिए तर आज दिउँसो ऊ शान्त महसुस गरिरहेको छ, तर ऊ राम्ररी सास फेर्छ, तर ऊ आफ्नो पेटमा साह्रै आक्रोशित छ, यो के हुनेछ! के तपाई मलाई मार्गनिर्देशन गर्न सक्नुहुन्छ म के गर्न सक्छु?
यदि तपाईंले यो सडकबाट उठ्नुभयो भने, यो धेरै नै आंत्रा परजीवी भएको सम्भावना छ। म तपाईंलाई सिफारिस गर्दछु कि तपाईलाई डाँडामा जानलाई आफ्नो फुर्रीको लागी एक गोली किन्न र, संयोगवश, कि उसले उसलाई हेर्छ कि उसले अरू केही छ कि छैन भनेर हेर्न। अलि अलि अलि गरेर तपाईलाई राम्रो लाग्नेछ।
मिशेल güiza भन्यो
हाई हेर, मैले करीव दुई हप्ता अघि एउटा बिरालालाई अपनाएको थिएँ र जब म उसलाई खेलिरहेको घरमा ल्याएँ जब उनी खेल्थे र धेरै सक्रिय थिए, ऊ बच्चा हो तर एक क्षणदेखि अर्कोमा ऊ एकदम एक्लो छ, ऊ खेल्दैन वा केहि पनि छैन र उसको पेट पनि मबाट नै आएको छ। उसलाई सुज्यो
Michel güiza लाई जवाफ दिनुहोस्
के ऊ फोहोर छ (बाहिरी भागमा मात्र होइन तर भित्र पनि हो? यदि होईन भने, म सिफारिस गर्दछु भने सबैभन्दा पहिले उसलाई गँड्यौलाको लागि एक गोली दिनुहोस्।
यदि ऊ अधिक दुई दिनमा सुधार गर्दैन भने ऊ पशु चिकित्सकले देख्नु पर्छ।
Thesniper "invincible45" ब्लेज भन्यो
कृपया मलाई मद्दत गर्नुहोस् मेरो बिरालो फोम बान्ता हो र विषाक्तता विषाक्त रोग धेरै नै ढिलो छ? !!!! कोही उत्तर दिनुहोस्
थिसनीपर "अजेय 45" ब्लेजलाई जवाफ दिनुहोस्
सम्भवतः यो विषाक्तताबाट हो। यदि तपाईंले पहिले नै त्यसो गर्नुभएन भने, तपाईंले त्यसलाई तत्काल पशु चिकित्सकमा लैजानु पर्छ। धेरै प्रोत्साहन।
नमस्ते .. मैले भर्खरै सडकबाट एउटा बिरालाको बच्चा उठाएँ, हिसाब गर्नुहोस् यो months महिना पुरानो हुनुपर्दछ। यसको कडा ग्याटिटा छ र यसले धेरै एडिन्डोलाई पेट पार्छ… यो के हुन सक्छ? यो मद्दत गर्नुहोस्, खाने र पिउने भए पनि जे होस्।
KAREN लाई जवाफ दिनुहोस्
सम्भवतः तपाईको आन्द्रा परजीवीहरु छन्। म उहाँलाई जाँच्न सिफारिस गर्दछु उसलाई जाँच्न र उनलाई कीराको गोली दिनुहोस्।
र खैर, बधाई 🙂
पाओला पर्रा कन्टरेरास भन्यो
म अलिकति दु: खी छु, मेरो बिरालो बान्ता गरिरहेछ, उसले मुश्किलले खान्छ तर ऊ गर्छ, उसको उर्जा र गतिशीलता उस्तै छ, तर मैले उसको कोटमा परिवर्तन देखेको छु, ऊ पातलो पनि छ र पेट पनि बान्ता पछाडि विशिष्ट लाग्छ, कडा ऊ कीराले गएको छ, ऊ धेरै बाथरूममा गएको छैन र उसलाई बान्ता गर्ने कुरा लगभग शुद्ध तरल हो र थोरै उसले खान्छ, हरियो रंगको हुन्छ; म के गर्न सक्छु? म के गर्न सक्छु? यसले मलाई चिन्ता गर्दछ।
Paola Parra Contreras लाई जवाफ दिनुहोस्
उसले खराब खाएको कुरा खाएको हुन सक्छ, वा, यदि उसले अरू बिरालाहरूसँग सम्पर्क राखेको छ भने उसले भाइरस समातेको हुन सक्छ।
म तपाईंलाई सिफारिस गर्दछु कि उसलाई पशु चिकित्सकमा लैजाऊ, र उसलाई चिकन ब्रोथ (हड्डीविहीन) खान पनि दिनुहोस्।
क्लाउडिया कार्डिनेस प्लेसहोल्डर छवि भन्यो
मसँग केही नवजात बिरालाहरू छन्, सबै कुरा उनीहरूसँग राम्ररी चलिरहेको थियो, तर एक हप्ता पछि मैले थाहा पाएँ कि ती मध्ये एउटा फुलेको पेट थियो र सबैभन्दा खराब कुरा के हो कि ऊ एकदम पातलो थियो, ऊ हुर्केन तर ऊ सामान्य जस्तो खायो। अन्य। सुरुमा मैले यसलाई केहि लामो समय सम्म छोड्ने निर्णय गरें, तर यो अझै पनि यस्तै र अझ खराब थियो र यसले मलाई चिन्तित पार्छ किनकि यो सधैं चिसो हुन्छ, आफूलाई अरूबाट टाढा राख्छ र धेरै शान्त छ। मलाई थाहा छैन यदि उनी3हप्ता मात्र पुरानो हो भने के गर्ने।
क्लाउडिया कर्डेनासमा जवाफ दिनुहोस्
तपाईंले पशु चिकित्सकमा लैजानु पर्छ। यो चिसो हुनु सामान्य छैन, न धेरै शान्त। तपाईंसँग आन्द्रा परजीवीहरू हुन सक्छ, तर यो अझै पनि एक पेशेवर द्वारा उपचार गरिनु पर्छ।
क्लाउडिया भिलोरिया भन्यो
कागजात मेरो बिराला3दिनसम्म घुमिरहेको छ उसले सामान्य खान्छ सामान्य फूर्तिलो घाममा उदाउन मन पर्छ र घाममा पेलिरहेको छ।
क्लाउडिया भिलोरियालाई जवाफ दिनुहोस्
कागज कृपया मेरो बिरालो दुखी छ, ऊ सामान्य खान्छ, ऊ एकदमै टक्कल र पातलो छ, हामीले उसलाई पहिले नै शुद्धी दियौं।
सबै भन्दा पहिले, म एक पशु चिकित्सक होइन, त्यसैले म तपाईंलाई दिन सक्ने सल्लाह कुनै पनि मामला मा एक पेशेवर को राय प्रतिस्थापन गर्दैन।
म तपाईंलाई सिफारिस गर्दछु कि तपाईलाई तुरुन्तै जाँचको लागि क्लिनिकमा लैजानुहोस्। यो हुन सक्छ कि ऊसँग केही प्रकारको एलर्जी थियो, तर पशु चिकित्सकबाट जाँच गर्नु राम्रो हुन्छ।
नमस्कार: मसंग लगभग बिरालो छ। Years बर्ष जुन मैले सडकबाट उठेको थिएँ उनको बच्चाहरूलाई स्याहारसुसार गरेपछि, मसँग उनीसँग दुई महीनाको साथ छ र म उनको पेट फुल्न थाल्छु, उनी असामान्य स्राव बहाउँदिन, उनी भोका छिन् र अलि अलि बढिन् प्रति थोरै मात्र हाम फाल्छ, वा जब तपाईं सुत्नुहुन्छ, सुत्नुभयो जस्तो बसिरहेको छ यदि तपाईंको छेउमा पल्ट्न सक्षम हुनुहुन्छ, के तपाईंलाई कुनै रोग हुनेछ? अभिवादन र तपाईंको उत्तरको लागि धन्यवाद
यस्तो सम्भावना छ कि तपाईंसँग आन्द्रा परजीवीहरू छन्, विशेष गरी यदि तपाईं सडकमा बसिरहनु भएको छ भने।
यो पुष्टि गर्न, म उनलाई पशु चिकित्सकमा लैजाने सिफारिस गर्दछु।
र उसलाई खानको लागि, उसलाई कुखुराको ब्रोथ वा भिजेको खानाको क्यान दिनुहोस् जुन सुक्खा खाना भन्दा बढी स्वाद र गन्ध छ।
क्लाउडिया लारीजा भन्यो
मेरो गार्डहाउस एक कुकुरले कुटे र यो बायाँ पछाडि यसको पेटको छेउमा फुल्न थाल्यो, हामी सोच्छौं कि यो एक फोर्ट पेट हुन सक्छ, तर हामीलाई के गर्ने थाहा छैन, यो सानी केटीले धेरै गुनासो गर्‍यो।
क्लाउडिया लारीजालाई जवाफ दिनुहोस्
माफ गर्नुहोस् तपाईंको बिरालाको बच्चालाई के भयो भन्ने बारे माफ गर्नुहोस्, तर उनलाई पशु चिकित्सकमा लैजानु उत्तम हुन्छ। म हैन र म योसँग तपाईंलाई मद्दत गर्न सक्दिन।
नमस्ते, मसँग बिरालो छ जुन पेट दुखाएको छ, खान चाहन्न र बिरामी सुत्न जान्छ, यस अवस्थामा मैले के गर्नुपर्छ?
यी अवस्थाहरूमा जनावरलाई तत्काल पशु चिकित्सकमा लैजानु पर्छ। जब बिरालाले खान मनपर्दैन र दिनको निद्रामा बिताउँदछ, यो किनभने यो संक्रमण, परजीवी वा भाइरल रोग हो कि यसले असर गरिरहेको छ।
नमस्कार, मसँग एउटा बिरालो छ जसको फुलिएको पेट रहेको छ र सामान्य खाँदछ, यो लगभग एक महिनाको लागि हो। यस सूजन कम गर्न म के गर्न सक्छु?
तपाईसँग आन्तरिक परजीवीहरू छन्। म उसलाई गँड्यौलाको गोलीको लागि डाक्टरमा लैजाने सिफारिस गर्दछु।
शुभ रात्री मसँग ,,०० केजीको बिराला छ, ऊ आफ्नो सपोसिटरी बनाउन वा पेशाब गर्न सक्दैन, ऊ खान चाहँदैन र ऊ धेरै रुन्छ, र पानी मैले उसलाई भोट दिन्छु र उसको थालमा राख्छु, मँ हैन के गर्ने थाहा छ। र दु: खी लागि। पशु चिकित्सक भन्छन् उनीहरूको प्रतिक्रियाहरू हेर्न पर्खनुहोस्, तर म दु: खी छु कि म मेरो बिरालाको बच्चालाई मद्दत गर्न सक्छु।
Dafne लाई जवाफ दिनुहोस्
म दोस्रो पशु चिकित्सा राय सोध्न सिफारिश गर्दछु। यो स्पष्ट छ कि बिरालामा केहि गलत छ र त्यसले पीडित छ। तपाईं उसलाई एक ठूलो चम्चा (मिठाईका चीजहरूको) सिरका दिन सक्नुहुन्छ ताकि ऊ शौच गर्न सक्छ। उसलाई खानको लागि, उहाँलाई कुखुराको ब्रोथ (हड्डीविहीन), वा सुख्खा भन्दा गन्ध फैलाउने गीला खाना दिन प्रयास गर्नुहोस्।
लुइस एन्ड्री भन्यो
शुभ साँझ म तपाईंलाई चाहन्छु कि मलाई मेरो बिरालोसँगको समस्याको साथ मद्दत गर्नुहोस्।
मेरो बिराला ame बर्षको लागि स्यामसी हो, किडनीमा कटुसको रोग छ कि भनेर जाँच गरेपछि यो निकै राम्रो थियो, तर अब केहि दिन पछि मेरो बिरालोले केही खाँदैन, धेरै ठूलो पेट, फुलिएको हड्डी छ, धेरै पानी पिउँछ, धेरै बान्ता गर्छ र ऊ आफैंले पेशाब गर्छ, ऊ धेरै हिंड्दैन, ऊ एकदम कमजोर छ, ऊ एक ठाउँमा बस्छ जस्तो लाग्छ ऊ मरेको छ र सर्न सक्दैन, उसको कपाल एकदम कुरूप र कडा छ। तर ऊ केहि पनि खाँदैन, ऊ days दिन सम्म जान्छ, त्यसोभए उसले के गर्न सक्छ? यो के हुनेछ? मलाई सहयोग गर
लुइस एन्ड्रीलाई जवाफ दिनुहोस्
तपाईंले तत्काल पशु चिकित्सकमा लैजानु पर्छ। Cat दिन भन्दा बढि खाना नखोजी बिरालामा धेरै समस्याहरू हुन सक्छन्, जस्तै हेपेटाइटिस।
उसलाई भिजेको बिरालो खाना, वा हड्डी रहित कुखुराको ब्रोथ दिने प्रयास गर्नुहोस् र हेर्नुहोस् यदि उसले खान्छ भने।
जर्ज एडुआर्डो भन्यो
मसँग एउटा बिरालोको बच्चा छ कि आज मैले थाहा पाएँ कि उसको पेट एकदमै फूलेको छ त्यसैले मैले उनलाई हेरचाह गरें र उनको पेटलाई धेरै कडा लाग्यो र अचानक उनी लडे र करिब seconds सेकेन्डसम्म रोके, मलाई लाग्यो कि ऊ मरेको छ र अलिकति बिस्तारै उठ्यो, मैले उसलाई सानो मासु दिन खोजें र उसले खाएनन् did मिनेट पछि म सुत्न कोशिस गर्छु र उसलाई थोरै मासु लिन्छु र उसले यो खाइहाल्छ, यो आज रात भयो, २ दिनमा म उनलाई पशु चिकित्सकमा लैजानेछु। यो खराब छ (यो सोमबार मात्र खुल्ला छ)
जर्ज एडुआर्डोलाई जवाफ दिनुहोस्
तपाईंसँग आन्द्रा परजीवीहरू, वा तपाईंको पाचन प्रणालीलाई असर गर्ने अधिक गम्भीर समस्या हुन सक्छ।
हो, यो सिफारिश गरिएको छ कि एक पशुचिकित्सकले उसलाई आफूसँग के छ बताऊ, र सबै भन्दा माथि उसलाई निको पार्न।
नमस्कार, शुभ रात्री र समयको लागि क्षमा गर्नुहोस्!
हामीले days दिन अगाडि करीव months महिनाको बिरालो एकदम पाले र सफा भए पनि भेट्टायौं, हामीले पानी कम गर्‍यौं र उसले पागल जस्तो पिएछ र हामीले उसलाई घरमा ल्याउने निर्णय ग and्यौं, र पहिलो मल तरल र तपौं दूधको साथ थियो, एकदमै गन्ध, उनले मैले खाएको मात्र मलाई लाग्छ म तरल बाथरूममा फेरि गएँ जबसम्म मैले रगत हेर्न थालें,
म वास्तवमै डराएको थियो। अब उनी बाथरुममा यति धेरै जान्छन कि, बिहान ऊ यति तरल पदार्थ पप गर्दैन, यद्यपि यो अझै पखाला नै हो र पछि जब उसले खायो ऊ तरल पुप बनाउँदछ तर मैले रगत अवलोकन गरेन भने पनि बिरालो सुलेको छ। पेट तर पातलो छ ... ऊ खान्छ र सामान्य पिउँछ, यद्यपि उसले लगभग दुई पटक घोर चिन्ता गर्दछ जुन उसले खान्छ।
मैले उसलाई पशु चिकित्सकमा लगें र उनीहरूले मलाई कीराको रोगी बनाइदिए र उनीहरूले मलाइ पखालाको लागी फ्ल्यागिल पठाए, भोली मैले त्यसलाई दिन सुरु गरें ... मैले दु: खित केहि देखेको छु र धेरै पटक ऊ एक्लै खोज्दछ भने पनि त्यहाँ छ खेल र गतिविधि को केहि समय।
मलाई थाहा छैन यदि यो नयाँ घरको तनाव भएको कारणले हुन्छ र यो एक्लै जान्छ वा उसलाई एन्टिबायोटिक दिन्छ जुन तिनीहरूले मलाई पठाए किनभने तिनीहरूले स्टूलको नमूना देख्न सकेन किनकि ऊ उफ्रन थाल्यो र उनीहरू डराए त्यसो गर्न। के म त्यसलाई दिन्छु वा केहि दिनहरू छोडिदिन्छु? म डराउँछु कि ऊ मोटो छैन .. यद्यपि उनी यहाँ been दिन मात्र आएका छन्, .. के अन्त गम्भीर हुनेछ?
मलाई सहयोगको लागि धन्यबाद
यो यस्तो हुनु सामान्य कुरा हो। पहिलो, किनकि सडकमा बस्ने सबै वा प्राय सबै बिरालाहरूको आन्द्रा परजीवीहरू छन्; र दोस्रो नयाँ ठाउँमा हुनुको लागि।
मेरो सल्लाह यो छ कि तपाइँ उसलाई पशु चिकित्सकले सिफारिस गरेको औषधि दिनुहोस्, र धेरै प्रेम, (खाना र स्पष्ट पानीको आधारभूत हेरचाहको थपमा 🙂)।
यसैले, तपाईले देख्नुहुनेछ कि कसरी हप्तामा यो बढि राम्रो हुन्छ।
खुशी हुनुहोस्, र बधाई दिनुहोस् तपाईंको नयाँ प्यारो साथीलाई!
जवाफ दिन को लागी धेरै धन्यबाद।
औषधीको साथ समस्या यो छ कि यो एक धेरै तीतो स्वाद छ र यो यो मलाई दिन को लागी यो असम्भव छ, त्यो पनि उसले निलिन्छ कि यो बाहिर थुक्छ, उहि लागि औषधी बदल्नुहोस् तर एक गोलीमा यसलाई काट्न र बिरामीहरूको लागि बिरालाहरूको लागि विशेष प्याटेसको साथ मिक्स गर्न सक्दछु तर जे मैले मिक्स गर्ने औषधि लगभग केही पनि छैन, यसले यसलाई पत्ता लगाउँदछ र खान्दैन। मेरो अन्तिम प्रयासमा म यो लिन्छु जब उनीहरूले उनीहरूको हात समात्छन् र यसलाई समातेर समातें मैले उसको मुख खोलें र गोली उनको मुखमा बन्द गर्यो (जसरी उनीहरू क्लिनिकमा गर्छन्) तर यसलाई नियन्त्रण गर्न पूर्ण रूपमा असम्भव छ र तपाइँले थुक्नुभयो र drooling र gagging…।
म असाध्यै निराश छु किनकि ऊ पखालाको दुखाईबाट धेरै पीडित छ र मलाई डर छ कि कुनै प्रकारको बढी गम्भीर बिरामी भएको कारण उनीहरूले उनलाई त्याग्नेछन् ... तपाईले के सोच्नुहुन्छ वा मेरो ठाउँमा तपाईं के गर्नुहुन्छ मलाई बताउनुहोस् र मलाई के गर्ने थाहा छैन! अग्रिम धन्यवाद ...
के तपाईंले उसलाई पानीको साथ सिरप दिने प्रयास गर्नुभयो, वा क्यान्डमा मिसिएको (वा ट्युना)? यसैले उसले यो खाने सम्भावना छ।
यदि कुनै मार्ग छैन भने, म केवल पशुचिकित्साको बारे मात्र सोच्न सक्छु तपाईंलाई ईन्जेक्टेबल औषधि दिने।
नमस्कार, तपाईंलाई दु: ख दिन माफ गर्नुहोस्, पशु चिकित्सकले मलाई मल्ट किन्न भन्यो कि उसलाई यो मन परेको छ कि भनेर हेर्न र त्यसैले यदि डाईरिया कपालले गर्दा यसलाई हटाउन सक्छ, राम्रो उसलाई माल्ट मन पर्छ र जब मैले यो देखे पछि मैले उनलाई काटें। pastilla माल्ट, र धमाका को साथ मिश्रित !! उसले खायो !! म धेरै खुसी थिए तर त्यसपछि जब मैले माल्टको पछाडि पढें भने मैले पढें कि तपाईंले यसलाई थोरै दिनै पर्छ र हप्तामा एक वा दुई पटक ...
अब मसँग अर्को समस्या छ ... मसँग धेरै डन्डोल छ !! ट्याब्लेटलाई डोजमा २ पटक दिइए पछि प्रत्येक दुई एक शर्टनटको आकारको शटहरूमा !! म के गरौ? यो तपाइँलाई अधिक पखाला हुनेछ, सही ??? के उपचार खराब भएको छ ??? मलाई जति सक्दो चाँडो कृपया भन्नुहोस् !! अभिवादन !! 😊😊😨😨
हो, तपाईलाई थोरै पखाला लाग्न सक्छ, तर बढि होइन।
उसलाई मामला छ भने एक सानो चामल संग कुखुराको ब्रोच दिनुहोस्।
नमस्कार फेरि हे, म तपाईंलाई केवल यो मात्र भन्न चाहान्छु कि मैले उसलाई पहिले नै times पटक फ्ल्यागेल दिएको छ र ऊ अझै तरल पखाला हो।
के तपाईंलाई थाहा छ यो सामान्यतया प्रभाव लिनको लागी कति समय लाग्छ? खाने बाहेक म उसलाई डाईरिया पनी बिरालाहरूको लागि विशेष प्याट दिन्छु (राम्रो) उमालेको चामलको साथ। अग्रिम धन्यवाद! 😊😊
बिरालाहरूमा पखाला टाढा जानको लागि लामो समय लाग्न सक्छ। मेरो बिरालोहरु मध्ये एक हप्ताको लागि बिरामी थियो।
हामीसँग धैर्यता हुनुपर्दछ। महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो कि तपाइँ तरल पदार्थ खान र पिउनुहुन्छ।
बिस्तारै ऊ निको हुनेछ।
फेरी अभिवादन! हाहा तपाईका सबै सल्लाह र मद्दत को लागी धन्यवाद !!
बिरालाहरूको लागि यो सामान्य हो जब उनीहरू धेरै उमालेको चामल खाउँदछन् तब पप बाहिर आउँछ? तिनीहरू परजीवीहरू छैनन्! या त यो भात हो वा फ्यागेलको कारण मैले यसलाई तपाईंलाई काटिएको गोलीमा दिन्छु ... दुई मध्ये एक हुनुपर्दछ। धन्यबाद! 😉😉
नमस्ते मार्टा 🙂।
हो, यो सामान्य छ, चिन्ता नलिनुहोस्।
म प्रयास गर्दैछु, आज उनीहरूले आफ्नो मलको विश्लेषण गरे किनभने मैले समस्याहरू हटाउनको लागि नमूना लिएको छु र उनीहरूमा परजीवीहरू छैन तर ब्याक्टेरियाहरू छन् ... त्यसैले म तपाईलाई मनपर्ने चीजहरूमा औषधि मिश्रण गर्ने प्रयास गर्दैछु! सबै चीजको लागि धेरै धेरै धन्यवाद! मँ मान्छेहरु को लागी के गर्न को लागी माया गर्छु, यदि तपाई पशुचिकित्सक हुनुहुन्न भने पनि तपाई जानवरहरु को लागी आफ्नो प्रेम देख्न सक्नुहुन्छ। म तिमी सबैलाई पनि माया गर्छु !! शुभकामना!
योनाटन सी भन्यो
नमस्ते म निराश छु मसँग लगभग १ महिनाको बिरालाको बच्चा छ, days दिन अघि मसँग अहिलेसम्म सबै गलत छ, पाँचौं दिनमा मैले चाँडै छोड्नुपर्दा केही कागजहरू (भुक्तानी, कागज इत्यादि) गर्नुपर्दा म दिन सक्दिन बिरालोको दूध र आफन्तले उसलाई दियो जब उनी आइपुगे कि म उसको थालमा दुधले भरिएको थिएँ त्यसैले मैले संकेत गरें कि ऊ पेट भरी देखि ऊ भरिपूर्ण छ, त्यसैले म उसलाई अझ बढी खाना दिने चिन्ता गर्दिन, राम्रो रातमा ऊ मसँग मेरो ओछ्यानमा थिए जब ऊ कतैबाट बान्ता लिन चाहान्छ त्यसैले म उसलाई आँगनमा चुपचाप बान्तामा छोड्ने निर्णय गरेको छु, परिस्थिति मेरो लागि झन् नराम्रो हुँदै गयो, तब ऊ भित्र जान चाहान्थ्यो किनकि जतिसुकै पटक ऊ सुत्न चाहन्छ जब ऊ जान्छ मलाई, छोटकरीमा, त्यसपछि मैले त्यसलाई छाडें कि उहाँ आफ्नो ओछ्यानमा सुताउनुभयो केही समय पछि म उनलाई भेट्न गएँ र उसको ओछ्यानमा फोमले बान्ता भयो, र ऊ त्यहाँ ओछ्यानमै लट्ठियो, मैले देखेको भन्दा उनलाई पखाला लागेको थियो, म चिन्तित छु यसले मलाई दुखी तुल्याउँछ कि यो केहि गम्भीर कुरा हो कि कृपया तपाईले सबै प्रतिक्रियाहरूमा प्रतिक्रिया देखाउनुभयो
बधाई छ र म एक उत्तर को लागी सकेसम्म चाँडो आशा गर्छु ...
योनाटन सी लाई जवाफ दिनुहोस्।
माफ गर्नुहोस् तपाईंको किटी खराब छ 🙁। जब तिनीहरू यति युवा हुन्छन्, कुनै पनि चीजले उनीहरूलाई धेरै असर गर्न सक्छ।
म तपाईंलाई भन्छु: यदि तपाईं बान्ता गर्नुभयो र पेट फूलिएको छ भने तपाईंसँग आन्द्रा परजीवीहरू हुन सक्छ। मलाई थाहा छैन यदि Telmin Unidia सिरप तपाईंको देशमा बिक्री हुनेछ। यो पशु चिकित्सा क्लिनिकमा बेचिन्छ, र कहिलेकाँही फार्मेसीहरूमा पनि उपलब्ध हुन्छ। यस औषधीले आन्द्रा परजीवीहरूका बिरूद्ध धेरै राम्रोसँग काम गर्दछ। खुराक १ मिलि / किलोग्राम हो।
अर्को सम्भावित कारण तपाईंको आहार हो। त्यो उमेरमा तपाईं बिरालाको खाना (क्यान, वा पानीमा भिजेको बिरालोको खाना) खान सक्नुहुन्छ। दुधले तपाईलाई चोट पुर्याउन सक्छ।
जे भए पनि, र यति सानो छ कि, यो उनलाई परीक्षण गर्न पशु चिकित्सकमा लगिनु उत्तम छ। केवल मामला मा।
मेरो बिरालाको बच्चा months महिना पुरानो र बाँझ छ, उनको paniita सूजिएको छ र त्यो एक रोल छ कि उनको मा झुण्ड्यो, मलाई लाग्छ ऊ मोटो हो किनभने उनी धेरै खाइन्छ। उनीसँग कुनै लक्षणहरू छैन, बान्ता हुँदैन, पखाला छैन र म उनलाई7महिनामा कीरावित गर्छु ... तर मलाई के चिन्ता छ कि जब म उनको पेटलाई छुन्छु भने यसले जान दिदैन र यसले मलाई काट्छ ... ठीक छ, ऊ त्यस्तो होइन। आलिंगन वा caresses को कट्टरपन्थी तर म एक उत्तर चाहन्छु। धन्यवाद!
Gigi लाई जवाफ दिनुहोस्
यो हुन सक्छ कि घाउ यति राम्ररी बन्द भएको छैन, र तपाइँ कुनै प्रकारको असुविधा महसुस गर्नुहुन्छ।
म तपाईंलाई सिफारिस गर्दछु उसलाई पशु चिकित्सकमा लैजानुहोस्, यदि त्यसो भएमा, पछि त्यसले स infected्क्रमित हुन्छ र परिस्थिति झनै नराम्रो हुँदै जान्छ।
एशले / मंगले #FNAFHS भन्यो
एम्म्म ... नमस्ते मलाई समस्या छ, मेरो बिरालो राम्रोसँग खान्छ, तर २ दिन उसले केही कुकुरहरूसँग लडे र त्यसपछि उसको पेट अलि बढ्यो र म यो जान्न चाहान्छु what
एशले / मा Mang्गललाई जवाफ दिनुहोस् #FNAFHS
तपाईको घाइते हुन सक्छ जुन अलि बढि फुलेको छ।
मेरो सल्लाह हो कि यसमा केही छ कि छैन भनेर हेर्नको लागि यसमा हेर्नुहोस्, र यदि यो गर्छ भने यसलाई हाइड्रोजन पेरोक्साइड र बिटाडाइनबाट सफा गर्नुहोस् - फार्मेसीहरूमा बिक्रीको लागि।
यदि यो सुधार हुँदैन, वा यदि यो केही दिनहरूमा बढ्यो भने, त्यसोभए पशु चिकित्सकमा जानु उत्तम हुन्छ यो जाँच गर्न।
एलेना Esmeralda भन्यो
नमस्कार, मेरो बिल्कुलै दिनको लागि पेटमा सूजन आएको छ, उसले सामान्य खाना खान जारी राख्छ र पीडा वा कुनै कुराको गुनासो गर्दैन।
यो उल्लेखनीय छ कि रातमा बाहिर जान्छ किनकि मेरा छिमेकीहरूसँग अरू बिरालाहरू पनि छन्।
मेरो सानो ब्रुनोले मलाई चिन्तित गर्यो: /
एलेना Esmeralda लाई जवाफ दिनुहोस्
के तपाईंले यो कीराण बनाउनुभयो? म तपाईंलाई सोध्दै छु किनकि यदि तपाईंसँग परजीवी छ भने तपाईं सामान्य जीवन बिताउन सक्नुहुनेछ, तर तपाईंको पेट बिग्रन सक्छ।
मेरो सल्लाह यो छ कि तपाईंले उसलाई एन्टिपेरासिटिक गोली दिनुहोस् - जो पशु चिकित्सक द्वारा सिफारिश गरिएको हो, वा पिपेट जसले दुबै टिक र प्वाइहरू साथै गँड्यौलाहरू हटाउँछ।
धेरै धेरै धन्यवाद मोनिका अभिवादन!
तपाईंलाई धन्यबाद, बधाई छ 🙂
नमस्ते! मेरो बिरालाको बच्चा months महिना पुरानो छ, उनले सामान्य जीवन व्यतीत गरे, उनले खेली, राम्रो खाई, तर यो उल्लेखनीय छ कि उनले पानी भन्दा बढी दूध पिएकी थिई, एक हप्ता अघि मैले नचाहेको व्यवहार देखेकी थिएँ, पहिले मैले याद गरें कि उनले सामान्य भन्दा बढी सुत्नुभयो, खेल्न चाहनुहुन्न र उनको भोक धेरै तल झर्दै थियो र ऊ दूध पनि पिउन चाहँदैन थिइन, तीन पटक जस्तो बान्ता गरे तर अनौठो कुरा यो हो कि उनी सामान्य स्नान गर्छिन्, मैले उनलाई लिएँ पशु चिकित्सक र उनले भने कि उनलाई शायद परजीवीहरू थिए त्यसैले मैले मेरो बच्चाको बच्चालाई लिने औषधी दिएँ तर मैले सुधार देखिन, यसको विपरीतमा मैले उनलाई अझै नराम्रो देखी, सामान्यतया, न त उनले आफ्नो टाउको उठाई, म डराएको थिएँ किनभने म उसको मृत्यु हुन चाहन्न, र करिब तीन दिन अगाडि वा हामीले थाहा पायौं कि उनको पेट एकदम फुलिएको छ। मैले सुरूमा भनेझैं मेरो बिरालाको बच्चाले उनको बिरालोको खाना खान छाड्यो र अब उनी केवल मासुको लागि भन्छिन् तर उनिले थोरै नै खान्छिन्, अब उनी एकदम पातलो छिन् र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ उसको पेट कती सुगन्धित छ। जसरी मलाई चिन्ता छ कि ऊ लगभग केही खाँदैन, मैले आज कलेजो किन्न शुरु गरें, उसले आधा खायो तर म देख्छु कि जब उसले खाए, ऊ घुमायो र एउटा कुनामा एउटा बल बनाए, यो हुनुपर्दछ किनभने उसको पेट दुख्छ। कृपया, म के गर्न सक्छु? मद्दत !!!!
मेरो सल्लाह यो छ कि तपाइँ उसलाई अर्को पशु चिकित्सकमा लैजानुहोस्। म एक पशुचिकित्सक होइन र म तिमीलाई मद्दत गर्न सक्दिन but तर म तपाईंलाई भन्न सक्छु कि यदि बिरालो सुधारिएको छैन, र वास्तवमा पशु चिकित्सकले दिएको उपचारसँगै बिग्रेको छ भने अर्कोमा जान उत्तम हुन्छ, विशेष गरी जब उसले खाइन्छ सानो
यदि तपाईं सुन्नुभयो पेट छ भने, यो एक अंग असफल हुन सुरु भएको हुन सक्छ, वा यो pus छ कि हुन सक्छ। तर त्यो केवल एक पेशेवर द्वारा पुष्टि गर्न सकिन्छ।
नमस्ते! जवाफ दिनका लागि धेरै धेरै धन्यबाद, आज वास्तवमा मेरी आमाले उनलाई अर्को पशु चिकित्सकमा लगिदिनुभयो, मैले उनको तापक्रम लिएँ र भगवानलाई धन्यवाद छ उनलाई कुनै ज्वरो लागेको छैन, र म पनि सम्भावित संक्रमण इन्कार गर्छु, उनले भनिन् जुन उनीसँग परजीवीहरू छन् तर पशु चिकित्सक कि हामी उनलाई पहिलो लिन्छन उनलाई थाहा छैन कि कसरी राम्रोसँग दवाई लेख्नु पर्छ। म अहिले धेरै ढुक्क छु, म मेरो बिरालोको बच्चालाई पुनः प्राप्त गर्न चाहन्छु। मलाई जवाफ दिन तपाईंको समयको लागि फेरि धन्यवाद।
म खुशी छु 🙂 अब निश्चित रूपले यो सुधारिएको छ।
नमस्ते! मेरो बिरालाको बच्चा, जो १ बर्ष र २ महिना पुरानो छ, धेरै खाना सोध्छ र धेरै खेल गर्छ, तर days दिन अघि म बिहान उठेँ र उनलाई मेरो ओछ्यानमा सधैँ देखिनँ (उनी कहिलेकाँही बाहिर जान्छन् र बिहान पनि उनी विन्डो खोल्नुहोस् ताकि यो उनीको लागि खुला रहनेछ, त्यो बिहान म आफैंले विन्डो खरोंच गर्दछु, मतलब उनी बाहिरकी थिईन्) तर दिनको समयमा मैले उनलाई उदास, तल, तातो र ओछ्यानमा मा घुमाएको देखेँ। यो तातो थियो रूपमा म उसलाई एक भिजेदार tuallita राख्छन् कसरी उसले प्रतिक्रिया दिनेछ भनेर, उसले यो मन नपराए। केहि घण्टा बितेपछि र मैले बिरालालाई खाना दिने प्रयास गरें ताकि मैले यसलाई बिस्तारै उठायो र भुँइमा छोडियो, यो सर्ने छैन जब मैले फोन गर्दा यो डर भयो र मैले पशु चिकित्सकलाई लग्यो, त्यहाँ तिनीहरूले उनलाई लगे। तापमान .. उनी fever१ ज्वरो थियो, तिनीहरूले उनलाई उनको ज्वरो कम गर्न एन्टिबायोटिकको साथ इंजेक्शन दिए। अर्को दिन मैले उनलाई समातें र ऊ कस्तो देखिन् भनेर हेर्न भुईमा राखी, मैले उसलाई धेरै चोटि बोलाएँ र उनी सरे, तर उनी सबै पछाडि सारिन्। मैले उसलाई अझै पनी थोरै दुध र बिरालाको खाना दिएँ कि ऊ पचाउने थियो कि भनेर ... र हो, उसले यसलाई पचाउन सक्छ। तेस्रो दिन उनले एक प्रकारको खुट्टाको आन्दोलनमा सुधार गरे र उसलाई केही दूध र बिरालोको खाना दिए (पशु चिकित्सकले भने कि यो पहिलो दिनमा डिहाइड्रेट भएको थियो) तर सामान्यतया उसले सधै पानी पिउँदछ। र आज, जुन चौथो दिन हो, म ओछ्यानमा मा कर्ल गर्न जारी राखें र मैले खाएको र पिएको त्यो पनि खान नपरोस्। मैले यो पनि याद गरें कि उसको पेट दुखिरहेछ, किनकि जब म उसलाई छुन्छु त्यसले मलाई अनुमति दिन्छ। असुविधाको लागि र कथा बनाएकोमा माफ गर्नुहोस् तर कृपया मलाई केही आशा दिनुहोस् किनकि मँ तपाईसँग के छैन भन्ने थाहा नहुनेमा व्याकुल छु। अभिवादन, म तपाईंको टिप्पणीको लागि प्रतीक्षा गर्नेछु।
माफ गर्नुहोस्, तर मैले तपाईंलाई भन्न बिर्सें कि चौथो दिनमा जब मैले उनलाई समातें र उनलाई खाना र दूध देखाए, उनले मलाई कुट्यो, मलाई लाग्यो कि उनले मलाई केहि बताउन चाहान्छन्, मलाई आशा छ कि तपाईंले मलाई थोरै मार्गदर्शन गर्नुहुन्छ। धन्यवाद
माफ गर्नुहोस् कि बिल्लीको बच्चाले खराब समय पाइरहेको छ 🙁
के तपाईंले कुनै खरोंच खोज्नु भएको छ? म तपाइँलाई सोध्छु किनकि उनी अझै झगडामा थिईन् र एउटा बिरालोले उनलाई कोरियो र रोग सार्‍यो - तिनीहरू प्रायः भाइरसको कारणले हुन्छन्।
यो पनि हुन सक्छ कि तपाईंले बिरामी बिरालाको मल र लाहसँग सम्पर्क राख्नु भएको छ।
गर्नु पर्ने? ठिक छ, मेरो सल्लाह हो कि तपाइँ उसलाई पशु चिकित्सकमा लैजानुहोस्। केवल उहाँलाई खुवाएर र seeing दिन पछि सुधार देखिन बिना नै, यो सम्भावना छ कि तपाईंको शरीरलाई स्वास्थ्य पुनः प्राप्त गर्न अतिरिक्त मद्दतको आवश्यकता छ।
नमस्ते मोनिका। मेरो बिरालोको पेट फुटेको बिन्दुमा फुल्छ र त्यसपछि ऊ पेट कस्ने सम्म पुस र रगतको कफजस्तो लाग्न थाल्छ। र अर्को महिना उस्तै। यो उसलाई पहिले भएको थिएन। यो जोस छ? वा यो केहि गम्भीर समस्या हो? धन्यबाद यदि तपाई मलाई जवाफ दिन सक्नुहुन्छ र यो अलि बढी स्पष्ट पार्नुहुन्छ भने
उनी कस्तो भावनात्मक छिन्? के तपाईं सामान्य जीवन बिताउनुहुन्छ?
यदि यो राम्रो गरीएको छैन र तपाईं जलवायु न्यानो वा हल्का भएको क्षेत्रमा बस्नुहुन्छ भने, यो तातोबाट उत्पन्न समस्या हुन सक्छ। मँ मौसमको बारेमा भन्दैछु किनकि यी पशुहरू सामान्यतया वसन्त heatतुमा गर्मी हुन्छन्, तर जब तिनीहरू हुन्छन्, उदाहरणका लागि, तातो भूमध्यसामग्रीमा उनीहरूले यसलाई वर्षमा धेरै पटक लिन सक्दछन्। तर तातो नै समस्या छैन, र वास्तवमा, बिरालाहरू रगत हुँदैन।
जे भए पनि, पशु चिकित्सकले एक चोटि हेराइदा चोट पुर्‍याउँदैन। यो रगतको लागि सामान्य छैन।
नमस्ते, तपाई कस्तो हुनुहुन्छ ... मेरो बिरालो एकदम पातलो र एकदम पखाला भएको पेटमा छ तर मलाई थाहा छैन किन धेरैले मलाई भन्छ कि उसले त्यस्तो कीरा वा बोट देखेको थियो जुन उसको शरीरलाई हानि पुर्‍याएको छ र म चाहन्छु। यो कसरी निको हुन्छ भनेर जान्न ... केहि औषधीहरू दिनुहोस् जुन पशु चिकित्सकले मलाई भन्यो तर ती मेरो बिरालाका लागि प्रभावकारी थिएनन् ...
माफ गर्नुहोस् तपाईंको बिरालोले गाह्रो समय पाइरहेको छ
म उसलाई अर्को पशु चिकित्सकमा लैजाने सिफारिस गर्दछु। दोस्रो रायको लागि पेशेवर सोध्नु यी केसहरूमा सँधै सहयोगी हुन्छ।
उसलाई खाने र तौल पुनः प्राप्त गर्न मद्दतको लागि, उहाँलाई भोक जगाउनुहोस्।
धन्यबाद मोनिका हो ...
NiTuJo OsCat भन्यो
नमस्ते, मेरो बिरालो सानो छ, यसमा ज्यादै फ्याट-फुलिएको पानसा छ जुन म गर्छु ..
र खानु, पानी पिउन र शान्त र सधैं ऊर्जा संग खेल्नुहोस्
र मैले प्यानमा छोएँ यो पीडा छ कि छैन भनेर हेर्न, तर म गुनासो वा केही गर्दिन
NiTuJo OsCat लाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्कार NiTuOjo ओस्केट।
तपाईलाई आन्द्रा परजीवीहरू हुन सक्छ। म उसलाई एन्टि-परजीवी उपचारको लागि डाक्टरमा लैजाने सिफारिस गर्दछु।
नमस्ते, मसँग एउटा बिरालो छ जसलाई यसको घाँटीमा कुकुरले टोकेको थियो, यसमा माथि फुलेको छ, यसले खाँदैन र सास फेर्न समस्या छ, यो खाने कुराबाट बाहिर आउँदछ र यस समयमा त्यसले केवल पानी पिउँछ, यो3दिन जस्तो रह्यो जब यो आयो उसको आँखामा एक समस्या थियो हामीले यसलाई ठीक गर्ने छौं तर म चिन्तित छु कि ऊ मर्नेछ, मलाई सहयोग गर्नुहोस्
नमस्ते, मसँग बिरालो छ जुन खाँदैन, यसमा घाँटी फूलिएको छ, यसले पानी मात्र पिउँछ, र यो के खाने छ फुल्छ, यसले केवल पानी पिउँछ, यो मर्दैछ, म के गर्छु, मलाई मद्दत गर्नुहोस्
तपाईले कुन गणना गर्नु हुन्छ, तपाईको बिरालो एकदम नराम्रो अवस्थामा छ। निको हुनको लागि उसलाई पशु चिकित्सा सहयोग चाहिन्छ।
माफ गर्नुहोस्, म तपाईंलाई अब मद्दत गर्न सक्दिन।
सेल्मा सानब्रिया ओर्टीगा भन्यो
नमस्ते एक प्रश्न ……। मेरो बिल्ली हरेक चोटि म उनको पेट छू उसले मलाई खानी गर्न चाहन्छ पहिले, यो त्यस्तो थिएन, कि त्यो के छ 🙁
SELMA SANABRIA ORTEGA लाई जवाफ दिनुहोस्
यदि उसले गुनासो गर्दछ जब तिमीले उसको पेट छुन्छ, यो किनभने उसले दुखाई वा बेचैनी महसुस गरेको छ।
मेरो सल्लाह यो छ कि तपाइँ उसलाई जाँच र उपचारको लागि पशु चिकित्सकमा लैजानुहोस्।
निकोलस गोमेज भन्यो
मेरो बिरालो शक्ति बिना महसुस, उसले आफ्नो मूत्राशय वा पेट वा मृगौला मा एक बल छ, म यो के हो थाहा छैन, तर ऊ कडा र धेरै सूजिएको छ, एक गोल्फ बल र एक सानो अधिक जस्तै, ऊ तल छ, जब ऊ निद्रा लाग्छ उसले आफ्नो जिब्रो बाहिर निकाल्छ, र आँखा खुला छ, मलाई डर छ कि उसलाई केहि घट्ने छ, (हामी तेस्रो पक्षहरूबाट पत्ता लगाउँछौं र हामी परामर्श र एकल उपचारको लागि 700०० पेसो पाउँछौं) हामी घरमा आर्थिक स having्कटमा छौं। र यसले हामीलाई दिदैन, यदि हामीसँग थोरै खाली थियौं भने हामी लिन्छौं, तर यसले हामीलाई दिँदैन भने, यसले के गर्न सक्छ? धन्यबाद
निकोलस गोमेजलाई जवाफ दिनुहोस्
मलाई माफ गर्नुहोस् तपाईंको बिरालो अस्वस्थ छ।
त्यो बल ट्यूमर हुन सक्छ, जो पशु चिकित्सकले हेर्नु पर्छ।
तपाईं जहिले पनि कुरा गर्न सक्नुहुन्छ एक व्यक्तिले तिनीहरूलाई थोरै हिसाबले तिर्न अनुमति दिनुहुन्छ कि भनेर। यदि तपाईं उसलाई आफ्नो अवस्था बुझाउनुहुन्छ भने, उसले तपाईंलाई मद्दत गर्न सक्छ।
नमस्कार, म जान्न चाहन्छु मेरो दुई महिनाको बिरालोको बच्चालाई के हुन्छ। हामीले उनलाई एक हप्ता अघि अर्को परिवारबाट अपनाएका थियौं, र तीन वा चार दिन उनको पेटमा स्वास्नी लाग्यो, उनी खेल्छिन् र सामान्य रूपमा खान्छिन् र धेरै सक्रिय छिन्, जबकि उनको रातो गुदा हुन्छ, तर उनी पेशा र पप सामान्य गर्छिन्, के हुन सक्छ? परजीवीहरू? सबै भन्दा पहिले, धन्यवाद। (:
परिवारको नयाँ सदस्यलाई बधाई छ 🙂
हो, सम्भवतः योसँग परजीवी छ। त्यो उमेर मा यो हुनु धेरै सामान्य छ। पशु चिकित्सकले तपाइँलाई एन्टिपारसिटिक दिन सक्छ।
यो नदेखीकन, म तपाईंलाई कसरी भन्न सक्दिन। तर यदि पशु चिकित्सकले उनी बोसो र बिरालोको बच्चा ठीक छ भन्छन्, संभावना ती हुन्।
नमस्कार, के तपाई मलाई मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ? मेरो बिरालोमा एनीमिक तस्वीर थियो र मैले उसलाई पशु चिकित्सकमा लगें उनीहरूले मलाई उनलाई कच्चा मासु दिए र तिनीहरूले उनलाई भिटामिन दिए, तिनीहरूले उनलाई सीरम दिएन किनकि उनी धेरै रक्तचाप भएका थिए मलाई पशु चिकित्सा औषधीको बारेमा केही थाहा छैन तर अब उसको पेट अलि अलि बढ्दै गयो र हामीले अल्ट्रासाउन्डमा देख्यौं कि उसको आन्द्रा तरल पदार्थमा तैरिरहेको थियो कि पशु चिकित्सकका अनुसार उनीहरूले यसलाई हटाउन सक्दैनन यदि तिनीहरूले यसलाई अध्ययन गर्न अलि अलि गरे भने ... तर यहाँ मेरो देशमा उनीहरूले गर्छन्। राम्रोसँग थाहा छैन जब सम्म उनीहरू विश्लेषणमा क्यानिनको मान राख्दैनन् ... म के गर्न सक्छु ???
मलाई माफ गर्नुहोस् बिरालो अस्वस्थ छ, तर म तपाईंलाई सिफारिश गर्दछु कि दोस्रो पशु चिकित्सा धारणाको लागि सोध्नुहोस्।
म पशु चिकित्सक होइन।
तपाईं उसलाई हड्डी रहित चिकन ब्रोथ दिन सक्नुहुन्छ ताकि उसले तौल गुमाउँदैन।
सुझावको लागि धन्यवाद, मैले अर्को पशु चिकित्सकसँग उसको तस्वीरको बारेमा कुरा गरें र उनीहरूले मलाई सुताउन सिफारिस गरे, उनी सुन्न नसक्ने पेटको कारणले रोक्न सकेनन्, आज मैले उसलाई निदाएको छु, उसको कथा धेरै दु: खी छ .. ऊ आयो। मेरो ग्यारेज सबै स्केलेटनको साथ ग्यारेज र यो पहिले नै स्वस्थ थियो तर तौल बढेको छैन .... हामीले उनको एनीमियासँग व्यवहार गर्यौं तर यो अझ बलियो थियो ... :(
माफ गर्नुहोस् 🙁
म तिमीलाई बुझ्छु। गत वर्ष मैले सुत्ने कोठामा हाल्नु पर्थ्यो जुन पनि खराब थियो। उसको डायाफ्राम टुटेको थियो र उसको सबै हिम्मत बढेको थियो ...
कमसेकम अब उनीहरूले कष्ट दिनेछैनन्। धेरै प्रोत्साहन।
नमस्कार शुभ रात्री, दुई दिन पहिले मैले एउटा सुन्दर बिरालोको बच्चा भेट्टाए, ऊ करिब डेढ महिनाको छ, मैले उसलाई पशु चिकित्सकमा लगें, मैले उनलाई कीरा बनायो तर ऊ सायद खान्छ, म उसलाई बच्चा बिरालाको खाना नुन बिना कुखुराको ब्रोथले भिजेको दिन्छु। केहि पनि छैन र म उसलाई एक ड्रॉपरको साथ दिन्छु, उनले पानी पिउँदैनन् र मैले उसलाई दूध दिन शुरू गरें जो कि एन्फाग्रो भनिने बच्चाहरूको लागि भोजन पूरक जस्तो हो, बिरालोको बच्चाले माया गर्छ तर मसँग भएकोले, त्यसले पोप गरेन। ऊ के गर्छ, र म उसको पेटमा केही सूजन आएको देख्न सक्दिन मैले के गर्न सक्छु मलाई धेरै चिन्ता लागेको छ र मसँग डाक्टरलाई लैजान धेरै पैसा छैन। 😭
Sandrid लाई जवाफ दिनुहोस्
यदि ऊ आफैंलाई राहत छैन भने, उनको ano-जननांग क्षेत्र मा न्यानो पानी संग moistened एक धुंध पार गर्न को लागी कोशिश गर्नुहोस्। आमाले उनलाई उत्तेजित गर्न केहि गर्छिन्।
यदि उसले अझै केहि गर्दैन भने, आफ्नो पशु चिकित्सकलाई सोध्नुहोस् कि कसरी उनलाई क्याथेटर राख्नुपर्दछ र आन्तरिक परजीवीहरू हटाउन तपाईलाई कुन औषधि दिन सक्नुहुन्छ, किनकि यो सम्भव छ।
एन्ड्रिया बाल्मेसेडा भन्यो
नमस्कार मोनिका! म तिमीलाई भन्दछु दुई हप्ता भन्दा पहिले मैले सडकबाट करिब २ महिना पुरानो बिराला उठायो। मैले उसको परीक्षण गरें र ऊ ठीक छ, ऊसँग टोक्सोप्लाज्मा छैन र उसको रगत गणना ठीक बाहिर आयो। मैले यसलाई उमालेको छैन किनकि उनीहरूले मलाई कुर्नु भनेका थिए। मेरो चिन्ताको विषय यो हो कि हिजो मैले उसलाई खाने को लागि केही टुना दिएँ, जुन उसले खायो र रातमा ऊ सास फेर्न थाल्यो। ऊ उठ्यो, सास फेर्दै सास फेर्छ, तर ऊ खान्छ, पानी पिए, खेल्छ (धेरै होइन तर हो) र ऊ सास फेर्न बाहेक तुलनात्मक रूपमा "सामान्य" देखिन्छ। यद्यपि उहाँ तल बस्नुहुन्छ र म उनलाई लोड गर्दा उहाँ अलिकता गुनासो गर्नुहुन्छ। म उसलाई पशु चिकित्सकमा लगें र उसले मलाई भन्यो कि सायद यो सास फेर्न ग्यासहरूको कारणले हो किनकि ऊ धेरैसँग थियो। म ग्याँसहरूको लागि केहि बूँदें लिन्छु, दिनको हरेक बाह्र घण्टामा, मैले उनलाई पहिले नै एक डोज दिएको थिएँ तर ऊ अझै सास फेर्दै छ, जसले मलाई चिन्ता गर्दछ। मैले कहिले पनि चिनेको थिइन कि ग्याँसहरूले बिरालोको बच्चामा सास फेर्ने श्वास उत्पन्न गर्दछ, के तपाईंलाई त्यो बारे केही थाहा छ? म के गर्ने भनेर जान्दिनँ भनेर धेरै चिन्तित छु, मलाई लाग्छ पशु चिकित्सक विषयमा त्यत्ति राम्रो थिएन, म अर्को खोज्नेछु तर जब म यसको बारेमा चिन्तित छु। म तपाईंको उत्तर प्रतीक्षा गर्छु। धन्यवाद!
Andrea Balmaceda लाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्ते मोनिका। Months महिनाको लागि मसँग एउटा बिरालो छ जो म छतबाट लिन्छु ऊ धेरै मायालु छ, ऊ ठूलो पेटको साथ आई, यति धेरै पशु चिकित्सक, जसले मलाई देख्यो, मेरो घरपालुवा जनावरले उनी गर्भवती ठाने तर मैले उनलाई शल्यक्रिया गरेपछि उनले भने मलाई थाहा छैन कि उनीसँग जे छ त्यो धेरै बोसो छैन, उनी सामान्य छिन उनी खेल्छिन्, दगुर्छिन्, उफ्रन्छन् र राम्रोसँग खान्छिन्, तर उनको पेटले काम गर्दैन, उनी स्वस्थ देखिन्छिन र राम्रो कोटमा उनले प्रो योजना खान्छिन् जुन मैले दिन्छु। मूत्र को समस्या को लागी अन्य पुरुष बिरालाहरु। मसँग चिन्तित छु कि उनीसँग केहि छैन भने तर मेरो पशु चिकित्सकले मलाई भन्छ कि ऊ बिरामी भएमा यसले देखाउने थियो र ऊ तल थिई। तपाईले यो जस्तै अर्को केस पनि देख्नु भयो। म तपाईंको उत्तर अग्रिम प्रतीक्षा गर्दैछु, धन्यवाद।
सत्य यो हो कि मैले त्यस्तो बिरालो देखेको छैन। तर तपाइँको पशु चिकित्सकले के भन्छ यो सत्य छ: यदि बिराला बिरामी भएको भए तपाईंले तुरून्त देख्नुहुनेछ
जे भए पनि, यदि तपाईंले उसलाई कीराको लागि एन्टिपेरासिटिक कहिल्यै दिनुभएन भने, म तपाईंलाई यो दिन सिफारिस गर्दछु। तिनीहरूले यसलाई एक गोलीमा बेच्छन् र पाइपेट (स्ट्रr्गोल्ड) मा।
तपाईंले उसलाई दिएको ट्युन, यो क्यान्ड वा ताजा थियो? यदि यो एउटा क्यानमाबाट आएको हो भने, तपाईंको शरीरले नराम्रा प्रतिक्रिया देखाएको हुन सक्छ। क्यान्ड टूना प्राय: जसो बिरालोहरूलाई ठ्याक्कै त्यस कारणको लागि दिन सिफारिस गरिदैन, किनकि यसले उनीहरूलाई बान्ता, पखाला र अन्ततः उनीहरूको स्वास्थ्यलाई थोरै कमजोर बनाउन सक्छ।
बूढीहरूको साथ यो सुधार गर्नुपर्छ, तर तपाईं धैर्य हुनु पर्छ। कहिलेकाँही यसले सुधार देखाउन समय लिन सक्दछ।
अझै पनि, यसलाई एक अर्को पशु चिकित्सकमा लैजाने सल्लाह छ। केवल मामला मा।
डिएगो ब्यारोस बुस्टोस भन्यो
हेलो डाक्टर, आज बिहान मेरो २ हप्ता पुरानो बिरालाको बच्चा जुन मैले सडकबाट उठाएको थिएँ धेरै निदाइसके पछि मरे र जब हामीले त्यसलाई जाँच्यौं, यसको सुगन्धित र बैजनी पेट भएको थियो। हामीलाई थाहा छैन उनको के भयो, हामी मेरो परिवारमा धेरै दु: खी छौं किनकि हामीले उनलाई एउटी बिरालाले दिने सम्पूर्ण हेरचाह दियौं।
तिमीलाई थाहा छ उसलाई के भयो?
डिएगो ब्यारोस बुस्टोसलाई जवाफ दिनुहोस्
म तपाईंको किट्टीमा के भएकोमा धेरै दु: खी छु।
मलाई थाहा छैन उसलाई के हुन सक्थ्यो। म डाक्टर होइन।
तपाईंलाई महत्त्वपूर्ण आन्द्रा परजीवी संक्रमण, वा आन्तरिक रक्तस्राव भएको हुन सक्छ।
ब्रायन जी भन्यो
नमस्ते मेरो बिरालो बिरामी छ र उसको पेट एकदम सुगन्धित छ र उसले केही गर्न सक्दैन जुन मैले गर्न सक्छु
Brayan g लाई जवाफ दिनुहोस्
तपाईलाई आन्द्रा परजीवीहरू हुन सक्छ। मेरो सल्लाह यो छ कि तपाईं उसलाई पशु चिकित्सकमा लैजाऊ उसलाई जाँच्न र उपचारमा राख्नुहोस्।
मेरो बिरालोको बच्चा खान चाहन्न, ऊ धेरै पानी पिउँदिन, मैले यो पनि याद गरें कि उनको गुद्वार चिढै छ, उनी हिजोदेखि पोपिएकी छैनिन र उनी रोइरहेकी छैन, यो के हुन सक्छ र म उसलाई कसरी मद्दत गर्न सक्छु?
यसलाई (स्याउ) सिरकाको एक बड़ा चम्चा दिने प्रयास गर्नुहोस्। यो खाली गर्न को लागी तपाईलाई धेरै सजिलो बनाउँदछ, र तपाईलाई नराम्रो लाग्दैन।
यदि यो अझै सुधार हुँदैन भने, उनलाई एक परीक्षाको लागि पशु चिकित्सकमा लैजानुहोस्।
नमस्ते मेरो बिरालो पेट फुलेको छ र सास फेर्न गाह्रो छ
(पसल जोड्ने) मैले उनलाई पशु चिकित्सकमा लगें र म उनलाई एक रेचक र केहि पनि पठाउँदिन, म उसलाई सीरम पठाउँछु तर ऊ तल देखिन्छ किनभने ऊ सायद खान्छिन्। के हुन सक्छ। धन्यवाद
Shirly लाई जवाफ दिनुहोस्
के तिनीहरूले आन्द्रा परजीवीको लागि उहाँलाई हेरे?
तपाईं उसलाई कुखुराको ब्रोथ (हाड रहित) खान दिन सक्नुहुन्छ।
परीक्षाको लागि दोस्रो पशु चिकित्सकलाई उनलाई लिन पनि सिफारिश गरिएको छ।
Mylagros * भन्यो
हेलो, मसँग month महिनाको बिरालाको बच्चा छ र उनी एकदम पातलो छिन् म उनलाई हड्डीमा पुगेकी हुँ र उनी निराश छिन् जब उनी अब खेल्ने गर्दिनन् र उनि धेरै सुत्छिन्, थोरै खाउँछिन् र थोरै पानी पिउँछिन्, मैले उनलाई सोचें। वर्षाको कारण दुःखी थियो किनकि मेरो देशमा यो वर्षा भएको थियो, र ऊ एकदम थोरै खान्छ, stomach दिनसम्म उसको पेट फुलेको छ, जब म उसको पानसिता यति अनौंठो आवाज सुन्न जान्छु, के ती परजीवीहरू वा हेपेटाइटिस हुनेछन्? मलाई मद्दत गर्नुहोस् 😭।
Mylagros * लाई जवाफ दिनुहोस्
तिनीहरू परजीवी हुनसक्दछन्, तर जाँचको लागि उनलाई पशु चिकित्सकमा लैजानु उत्तम हुन्छ।
कृपया मलाई मद्दत गर्नुहोस् मैले त्यहाँ तीन महिना पुरानो बिरालाको बच्चा भेट्टाए र ऊ रोए, उसको पेट सुगन्धित नभएसम्म उसको गुदा सुन्निन्छ, जब उसले त्यसलाई छोएपछि उसको पुच्छर निकाल्दैन, ऊ पुच्छर उठाउँदैन र ऊ कब्जोजस्तो हिंड्दछ। मलाई अहिले मसँग केहि समयको लागि पैसा छैन मद्दत गर्नुहोस्।
थाईलाई जवाफ दिनुहोस्
धेरै नराम्रो भएकोले उसलाई पशु चिकित्सा सहायता चाहिन्छ।
तपाईंको परजीवी हुन सक्छ, वा तपाईं कार दुर्घटनामा हुन सक्नुहुन्छ। तर तपाईसँग X-ray नभएसम्म यो थाहा हुन सक्दैन।
हुनसक्छ उनीहरूले तपाईंलाई एउटा पशु आश्रयमा मद्दत गर्न सक्छन्।
नमस्कार मलाई तपाईको सहयोग चाहिएको छ, कृपया म धेरै दु: खी छु र किनकि मेरो गार्डहाउस छ जुन मैले months महिना अगाडि बचाएको थिएँ, सुरुमा यो एकदम पातलो थियो र अलि अलि अलि राम्रो भयो ... तिनीहरूले हाम्रो सीडी परिवर्तन गरे र यो लामो थियो। यात्राको क्रममा यात्रा। ठीक छ, तर तिनीहरूको बालुवा खाए। अब २ हप्ता पछि ऊ खाँदै छैन, ऊ पेट, फिक्का आँखा, सुस्तता छ, ऊ पीडाको गुनासो गर्दैन र ऊ राम्ररी सास फेर्छ र पानी पिए। मैले उनलाई पहिले नै पुरानो खोलामा लगेँ5पटक उनीहरूले एक्स-रे गरे र उनीले उनीहरुलाई दिएको धेरै गुनासो गरेनन्। तर उनी उस्तै जारी राख्छन् उनीहरू भन्छन कि गुनासो केहि अडीयो। तर यो पप गर्दैन - मलाई अब के गर्ने थाहा छैन र मैले पहिले नै धेरै पैसा खर्च गरें। मैले उनको प्राकृतिक चीजको लागि उनको एथेना परिवर्तन गरें र केही पनि हुँदैन ... तर यदि उनले उनलाई आफ्नो पुरानो बालुवाको नजिक ल्याए भने, उनी तुरुन्तै यो खान चाहन्छिन। .. म के गरौ????
यसलाई सिरकाको एक बड़ा चम्चा (सूप) दिने प्रयास गर्नुहोस्। यसले उसलाई शौच गर्न, वा बिराला माल्ट गर्न मद्दत गर्दछ जुन तपाईं घरपालुवा स्टोर वा सुपरमार्केटमा फेला पार्नुहुनेछ।
नमस्ते, मसँग २० बर्षे बाँझ बिराला छ। एक महिना अघि उनी एकदम नराम्रो थिईन् किनभने उनले सधै सुख्खा खाना खाइन् तर बिरामी कुकुरले नानीलाई भिजेको खाना दिंदा पनि उसले खान थाली। वर्षको सुरुमा मैले उनलाई परिवर्तन गरिनँ उनले फेरि खाना खुवाउन थालिन् र पहिलो पटक ठीक थियो तर त्यसपछि उनले खान बन्द गर्यो र उनको मल सधैं पखाला नै रह्यो। उनले पानी पिएकी मात्र थिइन र धेरै खाएकी भए, डाक्टरले उनलाई एन्टिबायोटिकमा राखिन् र आजसम्म उनी एक महिनाको लागि उत्तम छिन्। म केवल चिन्तित छु कि त्यसबेलादेखि ऊ लगातार पेट हल्लाइरहेको छ, यो याद राख्नु पर्छ कि पशु चिकित्सकले मलाई आफ्नो उमेरमा चाहेको जे पनि खान सुझाव दियो, त्यसैले ऊ केवल भिजेको खाना खान्छ, यी आवाज पाचनको कारणले हुन सक्छ किनकि डेरासाइटले हप्ता पनि बनाउँछ र उसको पेटले पनि खाएको अर्केस्ट्रा जस्तो छ ??? धन्यबाद। शुभकामना
सबै भन्दा पहिले, तपाईंको बिरालोको राम्रो हेरचाहको लागि बधाई छ। २० बर्ष भइसक्यो ... म पक्का छु कि उनी धेरै बिग्रेकी छिन् 🙂
त्यो उमेरमा हो, तपाईले भनेको धेरै सम्भावना हुन्छ। वर्ष बित्दै जाँदा पाचन बिस्तारै घट्दै जान्छ र तपाईको शरीरबाट कहिलेकाँही आवाज आउँदै गरेको सुन्न यो सामान्य छ।
जे भए पनि, यदि तपाइँलाई श doubts्का लाग्छ भने, उनी डाक्टरले उनलाई के भन्छ भनि हेर्नुहोस्।
नमस्कार, मेरो बिरालो पेट सुलेको थियो ... केही पशुचिकित्सकहरू उनलाई खोप दिन आए र उनलाई कीराबाट ल्याए कि उसले उसलाई बम गर्न थाल्यो यदि हामी उनलाई भेट्न गयौं र उनीहरूले भने कि उनी अचानक कीराको रोगको शिकार भए र हरेक जनावरले त्यस्तै प्रतिक्रिया देखाए। तिनीहरूले एक एम्पोया राखे ... तर त्यसपछि उसले फेरि बान्ता गरे र असुविधाको साथ चिच्याए यदि तिनीहरूले उसलाई एम्पोया लगाए ... तर ऊ अझै तल र खराब छ, यो के हो?
लुसेरोलाई जवाफ दिनुहोस्
सबैभन्दा सुरक्षित कुरा यो हो कि तिनीहरू एन्टिपारैसिटिक्सको साइड इफेक्ट हुन्। अलि अलि गर्दै यो सुधार्नु पर्छ।
उसलाई भिजेको बिरालोको खाना वा खानको लागि कुखुराको ब्रोथ दिनुहोस्।
नमस्ते मोनिका, प्रश्न यो छ कि मसँग एउटा बिरालो छ जसले उसलाई बचायो कि ऊ सानो छ, ऊ पहिले नै मसँग रहेको छ करीव months महिना र करीव १ महिना उसको पेटमा फुल्न थाल्यो तर उसले आफ्नो गतिविधि सामान्य रूपमा गर्यो र हिजोदेखि ऊ सक्छ अब ऊ हिंड्दैन जबसम्म यो गर्ने बाटो फेला पार्दैन प्रयास गर्नुहोस्। तपाईलाई के लाग्छ? र तपाई के सिफारिस गर्नुहुन्छ?
साउरलाई जवाफ दिनुहोस्
यी सर्तहरूमा यो राम्रो हुन्छ तपाईले उनलाई पशु चिकित्सकमा लैजानुहुन्छ। तपाईसंग दुर्घटना भएको हुन सक्छ र त्यसैले तपाईको खुट्टाले धेरै चोटि चोट पुर्‍याएको छ, तर यो एक्स-रे बिना निश्चित गर्न सकिदैन।
Lourdes camal भन्यो
नमस्ते मोनिका। मँ आशा गर्दछु कि तपाईंले मलाई मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ, मसँग डेढ महिनाको बिराला छ, मैले उनलाई केही दिन अघि अपनाएको थिएँ र उनी धेरै चंचल छन्, गल्तीले गर्दा मैले उनलाई नजिकै पत्रिका छोडिदिएँ र उसले एउटा सानो टुक्रा निल्छ। के तपाईलाई यो गम्भीर लाग्छ? मलाई डर छ कि उसलाई केहि हुन्छ
Lourdes Caamal लाई जवाफ दिनुहोस्
सुरुमा होईन। तपाईंको शरीरले समस्या बिना यसलाई हटाउनेछ।
म पहिले नै भन्यो
हेलो, म हेर्न चाहन्छु कि तपाईले मलाई मद्दत गर्न सक्नुहुनेछ, मेरो बिरालाको बच्चा १२ बर्षको छ, ऊ days दिन अघि गर्मीमा शुरू भयो र उनको पेट फूलन थाल्यो, यस्तो चीज जुन उनलाई भएको थिएन, उनको पेट कडा छ, जुन यो थियो यसभन्दा अघि मैले उनलाई पशु चिकित्सकमा लगें। उनीहरूले कलेजो, मुटु र मृगौला सम्बन्धी रोगहरू हटाउन एक्स-रे र रगत परीक्षण गरे तर परिणाम पूर्ण रूपमा बाहिर आए। तिनीहरूले उनलाई एक मूत्रवर्धक उपचार पठाए किनभने उनीहरूले उनलाई सूजनमा गेरिंग दिए। पानी थियो। त्यसोभए ऊ लाग्छ कि उसले तरल पदार्थलाई पक्रिराखेको छ र मानौँ कि यो तातो र पतनको कारणले हो। हिजो मात्र उनले उपचार शुरू गर्‍यो तर म परिवर्तन देखिनँ, उनी सोच्दछन् कि मैले कुर्नु पर्छ, मलाई थाहा छ यो एकदम चाँडो छ किनकि म यो काम गर्न चाहन्छु, तर उनलाई अहिले यो दिन देख्दा मलाई फिक्र लाग्छ।
योयालाई जवाफ दिनुहोस्
यदि यो जोसका कारण भएको हो भने, म उनलाई सिफारिस गर्दछु। यस अपरेसनले क्यान्सर र अन्य समस्याहरूको जोखिमलाई घटाउँछ।
मलाई थाहा छैन तपाईंको बिरालोमा के छ, मलाई माफ गर्नुहोस्। म पशु चिकित्सक होइन, तर म तपाईंलाई अर्को रायको लागि अर्को पशु चिकित्सकलाई लिन सल्लाह दिन्छु।
नमस्ते, मलाई मेरो-बर्षेको बिरालाको साथ समस्या छ, उसको कडा पेट छ र कहिलेकाहीं उसले दुर्गन्धित पेटचुण्ड फाल्छ र उसको मुखबाट धेरै दुर्गन्ध आउँछ र कहिलेकाहीं उसलाई थोरै ज्वरो आयो।
मारुक्सीलाई जवाफ दिनुहोस्
मेरो सल्लाह पशु चिकित्सकलाई लिन को लागी छ। तपाईंसँग धेरै लक्षणहरू छन् जसले फ्लूलाई संकेत गर्न सक्छ।
दयाना नारानजो भन्यो
Ago पहिले मैले new नवजात बिरालाको बच्चा भेट्टाए, मैले तिनीहरूलाई दूध दिन शुरू गरें तर त्यसले उनीहरूलाई चोट पुर्‍यायो र २ कब्जको कारण मर्‍यो र उनीहरूको ग्यासहरू पार गर्न सक्षम भएन।
पशु चिकित्सकले बस्ने २ का लागि सेर्टल सिफारिस गर्यो तर उनीहरूको पेट भने फुलेको थिएन उनीहरू शौच गरेनन्।
मलाई तत्काल मद्दत चाहिन्छ।
मैले पहिले नै २ पशु चिकित्सा क्लिनिक भ्रमण गरिसकेका छु र उनीहरू मलाई उनीहरूलाई उत्तेजित गर्न भन्छन् तर तिनीहरू अति सानो छन् र शौच नगर्ने
साथै परीक्षामा तिनीहरूमा परजीवीहरू छन्
दयाना नारन्जोलाई जवाफ दिनुहोस्
यति सानो छ कि तिनीहरू उत्तेजित हुनु पर्छ। तपाईंले खाना पछिको १ minutes मिनेट पछि गुद्द्वार-जननांग क्षेत्रको तातो पानीमा ओसिलो एक धुप पार गर्नुपर्नेछ। पेटमा गोलाकार मालिसले पनि तिनीहरूलाई धेरै मद्दत गर्दछ।
यदि तिनीहरूले अझै दिसापिसाब गर्दैनन् भने, तपाईं सिरकाको साथ गुद्द्वार तरल गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईं सक्नुहुन्छ भने, तपाईंको कानबाट एक swab संग, यसलाई भित्र जान प्रयास गर्नुहोस्, केहि थोरै। तिनीहरूलाई कुनै हानी छैन।
यदि तिनीहरूमा परजीवी छ भने, तपाईंको पशु चिकित्सकले तपाईंलाई डिउर्मि sy सिरप दिन सक्छ।
अल्बर्टो रोड्रिग्ज अल्बर्ट भन्यो
नमस्ते, मेरो नाम अल्बर्टो हो र मेरी छोरीहरूले केही दिन पुरानो एउटा स्यान्ट्री बाकस भेट्टाए, मैले आँखा खुलेको आँखा खोलें र तपाईंले तिनीहरूको व्यापार गर्नुभएन। आज उनी of बर्षको लागि परिवारको हिस्सा भएको छ। मेरो चिन्ताको विषय के हो भने केही समयको लागि उनले आफ्नो पेटमा उसको भुँडीको केही हिस्सा हराएको छ र उसको गुलाबी छाला शो। उनी कहिल्यै बाहिरकी थिइनन्, उनी सधैं आफ्नो घर घरमा बिताउँछिन्। के तपाईलाई चिन्ताको कुरा छ जस्तो लाग्छ? म तपाइँको शीघ्र जवाफको कदर गर्छु। Clermont फ्लोरिडा, अल्बर्टो बाट।
अल्बर्टो रोड्रिग्ज अल्बर्टलाई जवाफ दिनुहोस्
जहाँसम्म बिरालाहरूले घर छोड्दैनन्, मान्छे गर्दछन्। कहिलेकाहिँ यो महसुस नगरी हामी हामीसँग भाडामा लिन्छौं, जस्तै टिक, फ्वा वा माइट। यदि त्यो क्षेत्र स्क्र्याच गरिएको छ भने सिफारिश गरिन्छ कि तपाइँ यसलाई पशु चिकित्सकमा लैजानुहोस्।
हेलेना इसाबेल कासास फोररो भन्यो
शुभ दिन दिउँसो, केहि दिन अघि मैले केटफ्याकहरूलाई ग्रहण गरें, ती दुई र आधा महिना पुरानो हो, तर मेरो एउटा बच्चाले उसलाई उसको पेटमा कडा पकड दियो र ऊ खान र खेलिन चाहँदैन, र मैले उनलाई लिए पशु चिकित्सकलाई, तिनीहरूले उसलाई औषधी पठाए, तर मलाई के गर्ने थाहा छैन किनभने उसले केही खाँदैन। चिन्ता छ कि म उत्तरको लागि कुर्दै छु। धन्यवाद
हेलेना इसाबेल कासास फोररोलाई जवाफ दिनुहोस्
उसलाई भिजेको फिड (क्यान) दिने प्रयास गर्नुहोस्। ती बिरालाहरूको लागि बढी सुवासिक र स्वादिष्ट हुन्छन्।
नमस्कार, दुई दिन अघि मैले लगभग २ महिना पुरानो एउटा बिरालोको बच्चालाई पन्जामा हिर्काए, म उनलाई डाक्टरमा गएँ कि उनी विभाजित छ कि भनेर हेर्न गए र तिनीहरूले मलाई भनेनन, तर आज ऊ सूजनको पेटबाट ब्यूँझ्यो र उसको पनि पानीले भरिएको सानो खुट्टा मैले त्यो तरल निकाल्न के दिन सक्छु? धन्यवाद
Kever लाई जवाफ दिनुहोस्
जब यो हुन्छ यो पशु चिकित्सकमा लैजानु राम्रो हुन्छ। तपाईले बिरालालाई स्व-औषधि लिन सक्नुहुन्न यदि यो पेशेवरको सल्लाहमा छैन भने, किनकि यसले खराब महसुस गर्ने जोखिम धेरै बढी हुन्छ।
नमस्कार, मेरो बिरालाको बच्चा years बर्षको हो र करिब २ महिना अघि उसले उसलाई मूत्र संक्रमण गरायो, उनले उसलाई पेशाब गर्न दिएन र जब हामी उनलाई लिएर गयौं, उनलाई औषधि र दुखाइको लागि केही घुस लगाईएको थियो, म त्यो पर्चा पछ्यायो १० दिन तर मैले उसलाई औषधि (गोली) मात्र gave दिन दिए किनकि उसको स्वास्थ्य राम्रो भए पछि उसलाई बान्ता गरायो र सर्सापारीलाले उसलाई आफैंमा पेशाब गर्यो। ऊ निको भयो र पूरै समस्या यो हो कि एक हप्ता अघि मैले उसलाई पेशाब गर्न समस्या भएको देखेको थिएँ र उसले आफ्नो जननांगलाई धेरै चाटिरहेको छ र उनीहरूलाई पेटमा छोड्दैन। म हेर्न चाहान्छु कि यदि उसले मलाई थोरै समयमै मद्दत गर्न सक्छ कि मैले केही महिना अघि मेरो जागिर गुमाएँ र मसँग पशु चिकित्सकमा लैजान पैसा पनि छैन र यो मेरोलागि निराशाजनक छ।
तपाईं उसलाई पानीको साथ मिश्रित खाना, वा भिजेको खानाको क्यान दिने प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ।
निस्सन्देह, यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईले दिनेमा सीरियल समावेश हुँदैन, किनकि बिरालाहरूमा धेरै धेरै मूत्र समस्याहरू एक खानेकुराको कारणले हुन्छ जसले अन्नलाई समावेश गर्दछ।
Eliz_22_25@hotmail.com .... भन्यो
नमस्कार, मसँग २-महिना पुरानो बिराला छ र आज मैले महसुस गरें कि उनी पप धेरै गाह्रो छ र यो उनको लागि गाह्रो छ। म उसलाई शाही बच्चाको खाना दिदैछु…। म उसलाई के गर्न सक्छु?
Eliz_22_25@hotmail.com लाई जवाफ दिनुहोस् ....
म तपाईंलाई सिफारिस गर्दछु कि तपाईले उसलाई यस्तो खाना दिनुहोस् जुन सिरी छैन। अक्सर उनीहरू बोक्ने फिडले बिरालाहरूमा विशेष समस्या ल्याउँछ।
त्यहाँ वास्तवमा धेरै राम्रा व्यक्तिहरू छन्, जस्तै Applaws, Origen, Acana, जंगलीको स्वाद, साँचो इन्स्टिनक्ट उच्च मांस।
यो छोटो समयमा सुधार हुनेछ, तर यदि यो अझै पनि छैन भने पशु चिकित्सकमा यसलाई लिन हिचकिचाउँदैन।
नमस्ते मोनिका। केही हप्ता अघि उसले सडकबाट एउटा बिराला निल्यो। तथ्य यो हो कि यससँग धेरै सूजन भएको आंत छ किनभने मसँग यो छ।
यो मैले उसलाई दिने दूधको कारणले हुन सक्छ?
सलिमालाई जवाफ दिनुहोस्
बिरालाहरूको लागि दूध धेरै राम्रो नहुन सक्छ।
तर यदि उहाँ सडकमा बस्नुहुन्थ्यो भने यो हुन सक्छ कि ऊको पेटमा परजीवी छ जुन पशुलाई पशु चिकित्सकले सिफारिश गरेको एन्टिपेरासाइटिक दिएर हटाइन्छ।
लिम्बर्ट क्विस्पे भन्यो
माफ गर्नुहोस् मलाई डाक्टर:
मेरो बिरालाले सास फेर्दै गइरहेको छ, ऊ सूचीत छैन, उसको पेट फुलेको छ र उसले केवल पानी पिउँदछ र थोरै खाना खान्छ। के तपाई मलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ?
लिम्बर्ट Quispe लाई जवाफ दिनुहोस्
म उनलाई परीक्षाको लागि डाक्टरमा लैजाने सिफारिस गर्दछु।
एउटा प्रश्न: मेरो बिरालो3बर्षको छ र जहिले पपको गन्ध आउँछ। मैले परामर्श गरेमा उनीहरूले मलाई भने कि हुन सक्छ ऊ अरू भन्दा कडा थियो (ऊ बचाईयो)। तर मैले यो पनि याद गरें कि कहिलेकाँही यो मेरो शीर्षमा आउँदछ, र केही समय पछि जब म यसलाई कम गर्दछु, यसले गन्धयुक्त तरल हल छोड्दछ। के हुन सक्छ? बाँकीका लागि पनि जानुहोस्। खान, खेल, आदि। धन्यवाद!
मेरो बिरालोलाई पनि त्यस्तै भयो। उसलाई एउटा ठूलो ग्यास्ट्रोएन्टेरिटिस थियो।
म उनलाई नमूना सहित सकेसम्म चाँडो पशु चिकित्सकमा लैजाने सिफारिस गर्दछु। यो दाग छोड्न को लागी सामान्य छैन।
नमस्ते, मसँग एउटा बिराला छ जुन एक दिनदेखि अर्को दिनमा एउटा फुलिएको प्यान हो। त्यो उसलाई भयो, र त्यहाँ अरू बिरालाहरू पनि थिए जसले उनलाई हिर्काए तर म उनलाई के गर्ने भनेर जान्दिन र मसँग धेरै छैन। पशु चिकित्सकलाई लिनको लागि पैसा।
यो सम्भव छ कि बिरालोले तपाईंलाई भाइरस संक्रमित गरेको छ। यो सिफारिश गरिन्छ कि तपाइँ एक पशुचिकित्सक हेर्नुहोस्।
यदि तपाईं सक्नुहुन्न भने, सायद तपाईले आफ्नो इलाकामा जनावरहरूको शरण स्थान, वा आफैँ पनि पशु चिकित्सकबाट पनि सहयोग माग्न सक्नुहुन्छ।
नमस्कार, मसँग नौ महिनाको बिरालो छ, केहि दिन अघि उसले धेरै बान्ता निकाले, उसको गिलास एकदम फुलिएको छ र पेट पनि सकियो, उसलाई मद्दत गर्न म के गर्न सक्छु?
जियुलियानालाई जवाफ दिनुहोस्
यी अवस्थाहरूमा उसलाई पशु चिकित्सकमा लैजान महत्त्वपूर्ण छ।
केवल उसले तपाईलाई बताउँदछ कि यो कसरी व्यवहार गर्ने।
राम्रो जयजयकार, म आशा गर्छु कि ऊ चाँडै निको हुनेछ।
अल्फोन्सो सिएरा भन्यो
शुभ रात्री, मलाई माफ गर्नुहोस्
मसँग बिरालोको बच्चा छ। र यसको केही महिना भइसक्यो जब यसको पेट खस्केको छ र यसको पानसिता फिक्क लाग्छ, म राम्ररी खान्छु, तर त्यसले धेरै पानी पिउँछ र धेरै पिसाब गर्छ र कपाल झर्दै गइरहेको छ।
म आशा गर्दछु कि तिमीले मलाई मद्दत गर्न सक्छौ किनभने, म निराश छु किनकि त्यहाँ दिनहरू छन् जब म उदास थिएँ
र पशु चिकित्सक जसले उसलाई लग्यो, उसलाई दिन्छ र उसलाई औषधि दिन्छ र म केही राहत देख्दिन
अल्फोन्सो सिएरालाई जवाफ दिनुहोस्
तपाईंले उल्लेख गर्नुभएका लक्षणहरूबाट, सम्भवतः तपाईलाई मृगौलीको समस्या छ (मिर्गौलाको)। तर उसको स्वास्थ्यको लागि उसले अर्को पशु चिकित्सकले देख्नै पर्छ, किनकि यस रोगलाई निको पार्न औषधी आवश्यक पर्दछ।
शुभ रात्री, मसँग 7-महिना पुरानो बिराला छ र उनी अलि अनौठो व्यवहार गर्दछिन्, उनले आफैलाई भुइँमा र पुलमा फ्याँकिदिए, तर सामान्य भन्दा धेरै नैराश्य र भुइँमा क्रलिw्ग हुँदा, र मलाई थाहा छैन। उनलाई पशु चिकित्सकमा लैजान के गर्ने, यो आवश्यक छ? म निराश महसुस गर्छु
यो neutered छ? त्यो उमेरमा उनीहरूसँग सामान्यतया पहिलो ताप हुन्छ। सबै भन्दा सल्लाहकार कुरा भनेको उनलाई प्रजनन ग्रन्थीहरू हटाउनु हो जुन अनावश्यक कूडाबाट जोगिन सक्छ र संयोगवश, उनी शान्त हुन्छन्।
नमस्कार, मेरो बिरालो बिरालोलाई लाग्छ कि उनी बान्ता लिन चाहन्छन् तर उसले दिसा गर्न सकेन ऊसँग २ दिन छ उसको साथ उसले आफ्नो पछाडि खुट्टामा हिर्काएको जस्तो लाग्यो, मैले उसलाई पशु चिकित्सकमा लगेँ तर म उनलाई मात्र दुई इन्जेक्सनहरू सोध्छु। आमा किनभने उसले लामो समय सम्म म शक्तिहीन महसुस गर्दछु र सबैभन्दा खराब चीज जुन मसँग पैसा छैन, अरु के गर्ने छैन।
जेलिनलाई जवाफ दिनुहोस्
माफ गर्नुहोस् तपाईंको बिरालो खराब छ, तर म पशु चिकित्सक होइन।
जे होस्, यसलाई सिरकाको एक बड़ा चम्चा दिने प्रयास गर्नुहोस्। यसले तपाईंलाई मल त्याग गर्न सहयोग गर्दछ।
उसलाई खानको लागि, उसलाई नरम खाना दिनुहोस्। घरेलु कुखुराको ब्रोथ (हड्डीविहीन), भिजेको बिरालोको खाना।
नमस्ते! मैले सडकमा करिब एक हप्ता अघि एउटा बिरालाको बच्चा भेट्टाए, हामीले यसलाई पहिरो लगायौं र हामी अझै यसलाई खोप दिन सक्दैनौं किनकि यो झण्डै साढे दुई महिना पुरानो हो र उनीहरूले भने कि यो सानो छ। यस्तो देखिन्छ कि ऊ हड्डीमा छ किनकि उसले यो खाएको थिएन जस्तो देखिन्छ, र अब हामी उनलाई for देखि cup कप कफीको लागि दिन्छौं, दूध र पानी पनि। तर हिजोदेखि उसको पेट फुलेको छ र मैले उसलाई थोरै तलबाट देखें। सबै प्रकारको पप, तरल, ठोस, हल्का खैरो, गाढा, आदि बनाउँछ। के यो त्यस्तो हुन सक्छ कि खाना परिवर्तनले उसलाई फुलाएको छ?
लेतीलाई जवाफ दिनुहोस्
यो दुध हो। बिरालाहरूको विशाल बहुमतले यो सहन सक्दैन।
तपाईं उसलाई बिरालाहरुका लागि तोकिएको एक दिन सक्नुहुन्छ, तर दुई र आधा महिनाको लागी उसलाई यसको खाँचो पर्दैन
खैर, के तपाईंले यसलाई बनाउनु भयो? सडकबाट आउँदा तपाईलाई गँड्यौला हुन सक्छ। तपाईंको पशु चिकित्सकले उसको लागि सिरप सिफारिस गर्न सक्छ।
नमस्कार, months महिना अघि हामीले १ महिना पुरानो बिरालोको उद्धार ग .्यौं। हामीले उसलाई पशु चिकित्सकमा लग्यौं र जब उनले कप्रोलोजी पछि छाला बनाइरहेका थिए तिनीहरूले ब्याक्टेरिया र ग्वार्डिया देखे। Panacur र एक flagyl को दुई उपचार पछि, हामीले तिनीहरूलाई निर्मूल गर्न सक्यौं।
यो अझै पनि बढि फुलेको पेट र छाला पपको साथ जारी रह्यो जबसम्म हामीले फिड भेट्टाएनौं जसले यसलाई कम्पेक्ट बनायो।
ऊ एकदम सक्रिय, चंचल र धेरै राम्ररी खान्छ (प्राय: थोरै रकम) तर अझै पनी पेट फुलेको हुन्छ।
मलाई थाहा छैन कि ऊ मोटो छ तर त्यसले मलाई चकित पार्छ किनकि उसको बाँकी शरीर म पातलो देखिन्छु, यो पेटको क्षेत्रको ठुलो बल जत्तिकै हो।
के तपाईंले यो कीराण बनाउनुभयो? त्यो उमेरमा तपाईं पहिले नै स्ट्रr्गोल्ड पिपेट राख्न सक्नुहुन्छ, जसले बाह्य र आन्तरिक दुबै प्रकारका परजीवीहरूलाई हटाउँछ।
यदि उसले सामान्य जीवन बितायो र तपाईले त्यो मात्र देख्नु भयो भने, सायद यो पनि हुन सक्छ कि कि उहाँसँग केही पनि छैन, वा उसलाई केही गँड्यौलाहरू छ।
एड्रियाना बोलासोस मुरिलो भन्यो
नमस्ते! आज मेरो बिरालो धेरै रोएको छ र पेटको गम्भीर दुखाइको साथ, यो फुलेको छ र धेरै कडा छ, साथै यसले धेरै पानी लिन्छ तर पेशाब गर्दैन! के हुन सक्छ? भोलि उसलाई पशु चिकित्सकमा लैजाँदा के त्यहाँ केही छ?
Adriana Bolaños Murillo लाई जवाफ दिनुहोस्
तपाईलाई मधुमेह हुन सक्छ, तर दुर्भाग्यवश घरेलु उपचार छैन।
कुकुरले बिरालो पछि मेरो बिरालोको कम्मरमा फ्याजेको पेट फुले र यसले पेशाब गर्न छोड्दैन, मेरो बिरालोको स्वास्थ्य सुधार गर्न म के गर्न सक्छु?
र कुनै भूख छैन
उसलाई थाहा हुनेछ कसरी तपाईंलाई स्वास्थ्य फिर्ता लिन मद्दत गर्ने।
टाटियाना जमोरा प्लेसहोल्डर छवि भन्यो
मेरो बिरालोको बच्चालाई नमस्कार, बिरालोको बच्चा शनिबार डिसेम्बर २ मा एउटा कारले ठक्कर खायो र यसको विशाल गांठ छ, पशु चिकित्सकले भन्छ यो उसको आन्द्रा हो तर ऊ अझै जीवित छ, उसले हामीलाई शल्य चिकित्साको लागि पर्खिरहेको छ, जुन हुन सक्छ
टाटियाना जमोरालाई जवाफ दिनुहोस्
माफ गर्नुहोस् तपाईंको किट्टी खराब छ, तर म पशु चिकित्सक होइन।
नमस्कार राम्रो, मेरो बिरालो7महिनाको छ र यस बाहेक ऊ धेरै खान्छ र धेरै चिन्तासहित उसको एउटा सूजी र कडा पेट छ, हामीलाई लाग्छ कि ती गँड्यौलाहरू हो, तर उनीहरूले उनलाई भर्खरै उपचार गरिरहेका थिए हामीले उनलाई लग्यौं, यदि कसैसँग छ भने उसलाई भयो, मलाई मद्दत गर्नुहोस्, म उसलाई केही भएको चाहन्न। पशु चिकित्सकले उनलाई हरेक महिना उग्र कीराको गोली पनि दियो र एक साथी जसले यो अध्ययन गरेको छ तर पशु चिकित्सकको रूपमा काम गर्दैन मलाई भन्यो कि उनीहरुलाई औषधि दिनु सामान्य छैन।
हो, यसमा गँड्यौलाहरू हुन सक्छ। यदि तपाईं सक्नुहुन्छ भने, Telmin Unidia भनिने सिरप लिने प्रयास गर्नुहोस्, र निर्देशनहरू पालना गर्नुहोस्।
यदि होईन भने, म तपाईंलाई सिफारिस गर्दछु दोस्रो पशु चिकित्सा रायको लागि।
yeicam सेमी भन्यो
नमस्कार, शुभ बिहानी, मेरो बिरालोले पेटमा बोसो लिन थाल्यो, यो गर्भवती बिरालो जस्तो देखिन्छ, मैले सोच्यो कि यो त्यस्तो चीज हो जुन पास हुन्छ तर दोस्रो हप्ताको लागि, यो एकदम ठूलो पेटसँगै पातलो देखिन्छ, यो धेरै निदाउँछ, यो कम सुत्दछ, यो अधिक निदाउँछ, म त्यसलाई छुन्छु, तर यसले गुनासो गर्दैन। पीडा वा असुविधाको मलाई थाहा छैन म के गर्नु पर्छ म राम्रोसँग हेर्न चाहन्छु ... तर मेरो क्षेत्रका यी पशु चिकित्सकहरू पाल्तु जनावर स्टाइलिस्टहरू भन्दा बढी छन्। अरु केही
Yeicam सेमी मा जवाफ दिनुहोस्
यसमा गँड्यौलाहरू हुन सक्छ। तर त्यो केवल एक पशु चिकित्सक द्वारा पुष्टि गर्न सकिन्छ, माफ गर्नुहोस्।
तपाईं barkibu.es मा जाँच गर्न सक्नुहुन्छ
नेल्ली बेडोया ओस्टन भन्यो
शुभ दिन दिउँसो, मेरो बिरालामा पेट फुलेको छ, तर ऊ सामान्य रूपमा खान्छ, र प्राय: खानाको लागि सोध्छ, ऊ २ महिनाको लागि यस्तै भैरहेको छ, पशु चिकित्सकले मलाई गिल भन्यो र मैले उसलाई अक्सिटेट्रासाइक्लिनको १ सेन्टीमिटर लगाएँ, days दिन। , तर ऊ सुधारिएको छैन। कृपया मलाई केहि सिफारिश गर्नुहोस्
नेल्ली बेडोया ओस्टनलाई जवाफ दिनुहोस्
यदि तपाईं सक्नुहुन्छ भने, म यसलाई अर्को पेशेवरमा लैजाने सिफारिस गर्दछु। न त यो तपाईं अस्वीकार गरिनु पर्छ तनाव.
क्रिस्टियन Alsina González भन्यो
अभिवादन ड्रा मोनिका। तपाईले मलाई दिन सक्नुहुने सल्लाहका लागि अग्रिम धन्यवाद। मसँग छ-बर्षे बिराला छ जसले केही दिन अघि मल खाने शुरू गर्यो। म उनीहरूको बाथरूमको रूपमा प्रयोग गर्ने ठाउँ सफा गर्ने प्रयास गर्छु किनकि मसँग अन्य बिरालोहरू छन्, तर मैले काममा जानु पर्छ, त्यसैले उसले गर्छ। मैले दुई चोटि डिवर्मर प्रयोग गरें तर मैले याद गरें कि उसको पेटमा सूजन छ, उसको भोक बढेको छ, उसले सामान्य बाहिर पानी पिउँछ र जब ऊ हिंड्छ ऊ पक्षबाट खस्दछ। उसले स्थायित्वको भावना पनि गुमाएको छ र खाना खाने समयमा उनी बेवास्ता गर्दछन्। उसले खान्छ र आफैलाई सफा गर्छ तर उसको चाल चालचलन भन्दा बेग्लै छ। सधै बिरालाहरू भए पनि, यो पहिलो पटक मैले यस किसिमको केस देखेको छु। म तपाईंलाई चाहन्छु कि मलाई स्पष्टीकरण दिनुहोस् र यदि यसको लागि त्यहाँ कुनै उपचार छ भने। धेरै धेरै धन्यवाद
क्रिस्टियन Alsina González लाई जवाफ दिनुहोस्
म तपाईंलाई सिफारिस गर्दछ कि यसलाई सकेसम्म चाँडो एक पेशेवर मा लिनुहोस्।
विल्बर्ट हम्बर्टो रिको रामेरेज भन्यो
मेरो बिरालाको बच्चा months महिनाको भयो, उनीसँग अलि कम समन्वय छ र खाँदैन, उनी सँधै धेरै खान्छिन् तर उदासिन महसुस गर्छिन्, उनी सुत्न चाहन्छिन्।
Wilbert humberto rico ramirez लाई जवाफ दिनुहोस्
तपाईंले पशु चिकित्सकमा लिनु पर्छ। म होईन, र जे भए पनि यहाँबाट (स्पेन) म धेरै गर्न सक्दिन।
हेलो हेर ... जब म मेरो बिरालोको पेट छुन्छु यो पानी जस्तो देखिन्छ ... यो गम्भीर छ ...
Brib लाई जवाफ दिनुहोस्
यो हुन सक्छ कि म थियो inestinal कीडे। म उनलाई मौखिक डिवर्मर लिन पशु चिकित्सकमा लैजाने सिफारिस गर्दछु।
नमस्कार, मेरो बिरालो तीन दिनसम्म एकदमै फुलिएको छ र कडा छ ... बुबाले उसलाई "बगैंचा" बाट चाउहरू खानु नदेखी सम्म यो घाँसजस्तो हो भनेर हामीले थाहा पाएनौं, हामीले यो पाइसकेका छौं कि ऊ चाहन्छु यो नखान्नुहोस्, ऊ पागल जस्तै खाइरहेको थियो, यो केवल केटनिप भएजस्तै .. जे भए पनि मलाई थाहा छ त्यो समस्या हुन सक्छ किनभने सबै प्याज "कच्चा" बिरुवाहरू बिरालाहरू र अन्य धेरै जनावरहरूका लागि विषाक्त छन्। म के गर्न सक्छु? उसले समग्र खाना र अर्को चीजको मिश्रण खान्छ जुन केटफिट वा केहि हो, के म पर्खनु पर्छ वा पशु चिकित्सकमा लैजानु पर्छ केही प्राप्त गर्न? ऊ पेटमा छुन्छ भने ऊ रिसाउँदैन, त्यसैले यदि त्यसले उनलाई दुखित बनायो भने, त्यसले उसलाई चिन्ता गर्नु हुँदैन वा धेरै चोट पुर्‍याउनु हुँदैन ... यदि यो मसँग हुने भए म उसलाई लैजान्छु, तर मेरो परिवारले सबैभन्दा धेरै घरेलु चीजहरू मन पराउँदछ, जबसम्म यो आपतकालिन छैन, पैसा बचत गर्न, त्यसैले।
हो, म तपाईंको परिवार बुझ्छु। तर म सुझाव दिन्छु कि यो पशु चिकित्सकमा लिनुहोस् यदि तपाईसँग पहिल्यै छैन भने किनभने प्यारो बिरालालाई विषाक्त छ।
नमस्ते, मेरो बिरालोले days दिनको लागि ठूलो र ठूलो फूलेको पेट भएको छ, धेरै खान्छ र लगभग मासु मात्र चाहान्छ। उहाँ सँधै पातलो हुनुहुन्थ्यो किनकि म उसलाई बाँझी गर्दिनथें तर कहिलेकाहीं म सोच्छु ऊ गर्भवती छ, तर ऊ पुरुष हो।
म एक पशुचिकित्सकसँग परामर्श सिफारिस गर्दछु। तपाईलाई राती धेरै धेरै खाना खानु सामान्य हुँदैन।
बेलेन काठ भन्यो
नमस्ते, शुभ बिहानी, मलाई तपाईको सहयोग चाहिन्छ, मेरो बिरालाको पिट्ने पशु चिकित्सकमा लैजान सक्षम हुनुपर्ने मसँग छैन। उनी सीमित छिन, उनी एक छेउबाट अर्को छेउमा सर्छिन्, उनी गुनासो गर्छिन्, मैले उनलाई जाँच गरें, तल्लो पेटको भाग फुलेको र गुलाबी छ। यो धेरै सहयोगी हुनेछ
बेलेन वुडलाई जवाफ दिनुहोस्
म तपाईंको बिरालाको लागि माफी चाहन्छु, तर मेरो सल्लाह यो छ कि तपाईं उदाहरणको लागि इन्टरनेटको माध्यमबाट एक पशुचिकित्सकलाई सम्पर्क गर्नुहुन्छ। म एक पशुचिकित्सक होईन र म तिमीलाई के भन्न सक्दिन।
नोमी फ्लोर्स भन्यो
नमस्ते, शुभ रात्री, मलाई एक शंका छ, मँ एक बिरालो छ कि एक सूजन र कडा पेट छ र गर्भवती छैन, उनी धेरै राम्रो संग शौच गर्दैनन्, उनी आधा तरल छिन् र कहिलेकाहीँ उनीहरुलाई थोपा जस्तै घाटा हुन्छ, उनी धेरै खान्छिन् र धेरै पानी पिउँछ। तर मलाई यो राम्रो संग थाहा छैन कि यो के हो।
Noemy Flores लाई जवाफ दिनुहोस्
तपाइँलाई संक्रमण हुन सक्छ। यो एक पशुचिकित्सा हेर्न को लागी राम्रो छ।
तपाइँको बिराला संग सुत्नुभन्दा पहिले कुरा मनमा राख्नु